မစနျးနဲ့ လိုးမိခွငျး – My Blog
မစနျးနဲ့ လိုးမိခွငျး (စ/ဆုံး)
ဂြူနျးဂြူနျး ဂတျြဂတျြ……….. ရနျကုနျကနေ မနျးလေးရထားကွီးဆနျတကျလပွေီ ဇျောဇျောတဈယောကျ စာရငျးကိုငျ ၁ ဘဝနဲ့ရနျကုနျကနေ မနျးလေး ကုမ်မ ဏီ ရုံးခှဲကို ပွောငျးရှရေ့တယျ။ ကားလတျမှတျမရလို့ရထားနဲ့လိုကျခဲ့ရတယျ ။အထူးတနျးကုနျလို့ရိုးရိုးတနျးကသာ စီးခဲ့ရတယျ ။ မတျြနှာခငျြးဆိုငျက အဖိုး အဖှားလငျမယား ဘေးနားမှာက ၃၅ နှဈ တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ မစနျးနဲ့အတူ တှဲထိုငျလာရတယျ။ မစနျးက အရမျးဖျောရှတေယျ၊ ခုမ သိပမေဲ့ အရငျး ခွာအသိမိတျဆှလေို ပဲ။ စကားပွောရငျလညျး ပေါငျလေးပုတျ ပုခုံးလေးပုတျ ပူးပူးကပျကပျ သိပျပွောတကျတာ ။ မတျြနှာခငျြးဆိုငျ အဖိုးအဖှားကဆို အရှယျ ကှာတဲ့ လငျမယားလို့ထငျနကွေတာ ။ ဟုတျတယျလေ မစနျးက မုနျ့တှေ ကနြျောမစားရငျ အထငျခှနျ့ကြှေးတာ ။သူယူလာတဲ့ ထမငျးကိုလညျး ၂ယောကျ အတူ စားကွတာ။ ညရောကျတော့ မစနျးက အဖှားတို့ကို ခုံမှာ နရောပေးပွီး သူနဲ့ကနြျော အောကျဆငျးအိပျ ကွတယျ။မစနျးက သူ့ယူလာတဲ့ အခငျး လေးခငျးပေးတယျ ။ ကနြျောကတော့ အဖိုးခုံ အောကျဝငျနရောယူလိုကျတယျ။ မမ စနျးက ကနြေျာ့ဘေးကပေါ့။ တဖတျလညျ့ စောငျးစောငျးလေးကြော ပေးနတေယျ ။ ရထားက ယိမျး သူ တငျကွီးတှကေ ကနြေျာ့ကို အတငျးလာလာတှနျးတယျ ။ ကနြေျာ့ ငပဲကလညျး ဘာပွောကောငျးမလညျး မတျလာတာပေါ့ ။ ကနြျောလညျး အတှငျးခံ ဘေးကနေ ထုတျပေး မမ စနျး တငျကွီးတှကွေား ထောကျပေးထားလိုကျတယျ ။မမ စနျး သိနတေယျ နောကျကို အတငျး တိုးတိုးကိုလာတာ။ မမ စနျးသတျပွငျးတှခြေ ။ ခနနတေော့ မမ အိမျသာ သှားအူးမယျ ဆိုလို့လိုကျပို့ပေးရတယျ ။ လူသှားလမျးမှာ ကလညျး သိတဲ့အတိုငျ အ လူကွပျ အိပျသူကအိပျ။ မမစနျးက ခါးလေးကုနျး လူရှငျးလိုကျ။ ရထားအလှူပျနဲ့ ကနြျောက နောကျက စောငျ့လိုကျ ။မမ စနျးက ပွနျလှညျ့ပွီး တိုးတိုးလေး
” စိတျထိနျးနျော မောငျလေး” အိမျသာထဲ ခနလေး မမ စနျးဝငျပွီ ပွနျထှတျလာတော့ သူလတျထဲက သူအတှငျးခံလေး ခြှတျလာပွီး ကနြေျာ့ ပုဆိုးခါးကွား လိပျယူ ခိုငျးတယျ ။ နရောပွနျရောကျတော့ အဖှားက ကလေးတို့လငျမယား က အဖှားတို့ငယျငယျကအတိုငျးပဲတဲ့။ မမစနျးက မငွငျးပဲ ရီနတေယျ ။ နရောလေး ပွနျယူ အိပျတယျ။ မမစနျးက သူ့အထုပျထဲက စောလေးယူ ကာ ၂ ယောကျအတူခွူံပွီး ဘေးတဈစောငျး လှညျ့ပေးထားတားတယျ ။ကနြျော လညျး နောကျကနဖေတျ မမစနျးနို့လေးတှကေိုငျပေးနတေယျ။မမစနျးက သူ့ရှပျအကျြီအပေါကွယျသီး ၂လုံးဖွူတျပေးတော့ ဘျောလီကွားကနေ နို့ အတှငျးသားထိကိုငျခွပေေးနတေုနျး မမစနျးက သူ့ထမီလေးအလိုကျသငျ့အောကျလြော့ပေး ကနြျောလညျး ပုဆိုးလေးလြောခြ ဘောငျဘီကို ပေါငျထိ လြော တောငျနတေဲ့ လီးကွီး မမ စနျး တငျကွားကွ ပွူနတေဲ့ အဖုတျထဲ ထိုးသှငျးလိုကျတယျ ။ ရထားအယိမျး မမစနျးကလညျး အတငျးနောကျကပျ ။ ခနနတေော့ ကနြေျာ့သုတျရညျတှေ မမစနျး အဖုတျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျပွီလေ။မမစနျး အသာမပွနေိုငျ။တိုးတိုးလေး “မောငျလေး လီးမထုတျနဲ့အူး ထိုးထညျ့ထား” “ဟုတျ မမ” “တစခှါမ မလိုးဘူး ဘူးလား” “ဟငျ့အငျ ခုစလိုးတာ အားလညျးမရ လီးလညျးနာတယျ မမ” “ခခြ” “မမက အပြိူကွီးလား ကွပျလိုကျတာ” “အငျးပေါ့ မမလညျး မငျ့လီးတောငျ့ အဖုတျက အရညျထှတျခံခငျြလာတာ” ကနြျော လီးလေးက တဖွေးဖွေး မမစနျးအဖုတျထဲက သူ့အလိုလိုပွနျ ထှကျလာ ပွီ ။ မမစနျးက ကနြျောဘကျလှညျ့လာပွီး သူ့နို့တှေ စို့ခိုငျး ကနြျောလီးလေး စှပေးနတေယျ ။
ခနနေ လီးလေး ပွနျတောငျလာတော့ မမစနျး ပွနျလှညျ့ ကနြျောလီးလေးကိုငျ သူ့စောကျဖုတျထဲ ထိုးထညျ့ပွီး နောကျကို အတငျးကပျကပျလာ ရထားက ယိမျး ကနြျောလညျး အားမရ ဖွဈသလိုစောငျ့လိုးရ ခုံနဲ့စောငျမိလို့လညျး နာပေါ့။ဒုတိယခြီဆိုတော့ နညျးနညျးကွာတော့ မမစနျးစောကျဖုတျထဲကလညျး အရညျတှေ အမြားကွီးထှကျ ကနြျောလညျးထှကျ ပွှိူငျတူပွီး ဖတျအိပျလိုကျတယျ ။ အရမျးအိပျပြျောသှားတာ ။ မိုးလငျးတော့ မမစနျးက တောငျ နှိူးယူရ တယျ ။ မနျးလေးရောကျတော့ မမ စနျးက သူ့အိမျချေါသှားတယျ ။ကွတျဥ၂လုံးယူလာပွီး ဖောကျတိုကျ။ သူ့အခနျးထဲ ချေါ ကနြေျာ့လီးကို စုပျတော့တာပဲ။ သိတဲ့အတိုငျးပေါ့ လီးက ခတျြခွငျးတောငျ မမစနျး ကုနျးခိုငျးပွီး နောကျက စောငျ့လိုး အငျ့ အငျ့ အငျ့ အာ့ အာ့ အာ့ “မောငျလေးက ခုကွ အလိုးကောငျး တယျ ခဈြလိုကျတာမောငျလေးရယျ” ကနြျောလညျး အောကားတှေ ကွညျ့ဘူးတော့ မမစနျးကို ကုနျးခိုငျရာကနေ ပတျလကျလှနျ ပေါငျတဈခြောငျ ထောငျ ပွီး စောငျ့စောငျ့လိုး အငျ့ အငျ့ အငျ့ အာ့ ကောငျးလိုကျတာ မောငျလေးရယျ မမစနျးကိုအပျေါက နစေောငျ့ခိုငျး မမစနျးက အပျေါကနေ ကုနျးစောငျ့ သူ့နို့ တှေ ခကြေနြျောလညျး အောကျကကော့စောငျ့ အာ့ အာ့ အာ့ မမစနျးအရညျတှထှေကျ ခန်ဒာလေးပြော့လာပွီး မစောငျ့နိုငျပဲ ကုနျးကုနျးလေး ကနြေျာ့ပျေါ မှောကျခလြိုကျတယျ။ မမစနျး နုတျခမျးလေးစုပျပေးပွီး လိမျ့ခကြာ ပေါငျလေး ၂လုံးထောငျ စောငျ့စောငျ့လိုး အာ့ ကောငျ့လိုကျတာ မောငျလေးရယျ အရညျတှနေဲ့ ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ ဖတျ. ဖတျ. ဖတျ အငျ့. အငျ့ အငျ့ အာ့. အာ့. အာ့ ကနြျော သုတျထှကျခါနီး အသားကုနျစောငျ့လိုးထညျ့လိုကျတာ “အမေ့” မောငျလေးရယျ လိုးခတျြကတော့ အရမျး ကွမျးတယျ မမ မခှဲနိုငျတော့ဘူး။နလညျ ၂ နာရီလော၇ျ ကုမ်မဏီ အဆောငျ ရောကျ ကုမ်မဏီရုံးခနျးသတငျးပို့ မနျနဂြော ဦးထှနျးမွငျ့က အရမျးဖျောရှတေယျ ။ ခရီးပနျးလာတော့ နားခိုငျးတယျလေ ။ညနရေုံးဆငျး ၄ နာရီလောကျ ဦးထှနျးမွငျ့ အဆောငျရောကျလာတယျ။
“အသဈလေး ညီ လေး ဇျောဇျော” “အကို့ကို မပွူစုခငျြဘူးလား” အငျးစကားချေါလာတော့လညျး လိုကျပွူစုရတော့မယျ့ ပေါ့ “ဟုတျကိုကွီး ကွိုကျတဲ့ ဘီယာဆိုငျသှား” ဘဲကွီးက အလိုမဟုတျ သူ့သှားနကွေ ဘီအီးဆိုငျ ကိုယျက မသောကျတကျ တဈယောကျထဲ တဈလုံးခှဲ ခလြိုကျတယျ ။ သူ့မိနျးမ အလှပွငျ ကွောငျး သူ့ကိုကွဂရုမစိုကျ သူ့အလှပဲ ပွငျကွောငျး ဒါ့ကွောငျ့ သူ နတေို့ငျး အမူးသောကျကွောငျး သာလိကာနဲ့ဇရကျ ပေါငျဆကျထားသလို ပွောတော့တာ ပဲ ။ လူမှနျးမသိတော့လို့သူ့အိမျလိုကျပို့တာ ကနြျောရောကျဖူးခဲ့တဲ့ မမစနျးအိမျ “သနောကွီး မူးလာပွနျပွီ ဧညျ့သညျပါလို့ကြူပျငွိမျနလေိုကျမယျ” “အေ့ ….ဟုတျတယျ ငါ့ညီလေး အသဈငါ့ရုံးက ဒီနမှေ့ ရနျကုနျက ပွောငျးလာတာ” “ညီလေး ဒီမှာ ထမငျးစား ညအိပျ မနကျ ကိုကွီးနဲ့ အတူ ရုံးသှားမယျ” ” ရပါ တယျ ကိုကွီးရယျ အဆောငျပွနအိပျပါ့မယျ” ” နိုးနိုး ဒီမှာ အိပျ ညီ” ” မိစနျး သှား ထမငျးခတျြ ဟငျးကောငျးပစေ ” ညီလေး အကိုနညျးနညျး ယူလိုကျအူး မယျ “ဟနျဆောငျရပမေဲ့ မမစနျးကို ထိတှခေ့ငျြသေးတယျ ။ ဘဲကွီးက မူးပွီး သူ့အိပျယာပျေါ မှောကျနပွေီ ။ မမ စနျး မီးဖိုးခြောငျထဲ လိုကျသှားပွီး ” မငျး ကံကောငျးတယျ မမ မငျးကို လှမျးပွီး ပွနျတှခေ့ငျြတယျ မငျးပွနျလာပါစေ ဆုတောငျးနတော ။ “မမ လိမျတယျ အပြိူကွီးမဟုတျပဲနဲ့” “ချချ မငျးလေးက တ ကယျ့မလိုးဘူးတဲ့အရိုငျးလေး” “သနောကွီး မှောကျနပွေီ “ လာမောငျလေး ဟိုဘတျအခနျးထဲ ကို” မမစနျးက အိပျယာခငျးဖို့ကုနျးနတေုနျး ကနြျောလညျး လီးကတောငျနတေော့ နောကျကနေ ထမီလှနျပွီး မမစနျး အဖုတျထဲ့ စောငျ့ထညျ့လိုကျတယျ့ “အမလေး လူဆိုးလေး ကွမျးထြာ” မမစနျး ခုတငျပျေါ အလိုကျသငျ့ မှောကျခကြုနျးလိုကျတယျ။
ခါလေးကိုငျကိုငျစောငျ့ အငျ့ အာ့ မောငျလေးရယျ ကောငျးလိုကျတာ အငျ့ အငျ့ မမစနျးလညျး အရညျတှထှေကျ ဗွှတျ ဗွှတျ အို မောငျလေး ရယျ အငျ့အငျ့ အငျ့ပိုစရှငျမပွောငျးပဲ ကုနျးလိုးနလေိုကျတယျကနြျောထှတျခါနီး စောငျ့လိုးကာ ၂ဦးအတူ မှောကျဖတျ မှိနျးနလေိုကျတယျ……. ဒုတိယပိုငျးဆကျရနျ ” မ ဝလသေော ရမ်မတျခြို “ ” မဝလသေော ရမ်မတျ ခြို ” ကနြေျာ့လီးလေး အာသာပွေ တော့ မမစနျး အဖုတျထဲကနေ ပွနျထှတျလာပွီ ။ မမစနျး ထမငျးဟငျးခြ တျ ကနြျော ကတော့ TV ကွညျ့နလေိုကျတယျ ည ၈ နာရီလောကျ ဦးထှနျးမွငျ့ အမူးပွေ လာတော့ ထမငျးထစားတော့တယျ ။ “ညီလေး ထမငျးစားပွီး လား” “ကိုကွီးစောငျ့နတော မစားရသေးဘူး” “ဟာ မိနျးမ ကြှေးနှငျ့တာမဟုတျဘူးကှာ ကဲ ခူး စားကွမယျ “ ၃ ယောကျသား ထမငျးအတူစားပွီး ဧညျ့ခနျး မှာ အလ်လာပ သလ်လာပ စကားတှေ ပွောကွပွီးမမစနျးက သူယောကျြားနဲ့ ကနြေျာ့အတှကျ လိမ်မျောရညျ ၂ခှတျ လာခပြေးတယျ။ အတူလိမ်မျောရညျသောကျ ပွီး ခနနတေော့ ဦးထှနျးမွငျ့ အိပျယာထဲ ဝငျသှားပွီ ။ “ညီလေး အကို အိပျတော့မယျ အမူးမပွေ သေးဘူးကှ ။ မနကျရုံးမတကျနိုငျပဲ နအေူးမယျ “ “ဟုတျကို ကွီး ကနြျောလညျး အိပျမယျ” “ယောကျြား ကြုပျ ကိုရီးယားကား ကွညျ့လိုကျအူးမယျ “ “အေးပါ မိနျးမရယျ မငျးတို့မိနျးမတိုငျက ကိုရီးယားမှ ကိုရီးယားတှေ ကွညျ့ကွညျ့”“ကိုးရီးယားက အပိုငျးဆကျ စှဲတယျ ကိုကွီးရ” ကနြျောလညျး ကစားဖောရှော လိုကျပွောပေးလိုကျတယျ ။ ဦးထှနျးမွငျ့ အိပျယာထဲ ဝငျ သှားတော့ မမစနျးပါ လိုကျသှားတယျ ။ ကနြျောခန တီဗှီကွညျ့နလေိုကျတယျ ။ တအောငျ့ နတေော့ မမ စနျး ပွနျထှတျလာတယျ ။ ရငျသားနှဈမှာ မွငျရတဲ့ ပါး လှာတဲ့ ညဝတျ အကငြ်္ီလေးနဲ့ ဘျောလီကမပါ ။ ရငျနှမှာ တောငျ့တငျးလို့နို့၂လုံးရဲ့ ဖွူဖှေး အိစကျစကျက ကနြေျာ့ လီးကို တနျးမတျစေ တယျ ။
မမစနျးက ကနြေျာ့နား တနျးကပျလာပွီး လီးလေးကို လာကိုငျတယျ။ “ဟငျ့ ကောငျစုတျလေး ဝတယျမရှိဘူးနျော “မမ ဒီည မသငျ့တျောလောကျဘူး ကိုကွီး နိုးလာပါ့မယျ” “ဟိ အိပျဆေးအစှမျးပွနပေါပွီကှာ “ “ဗြာ…….” “လာ အခနျးထဲ သှားမယျ “ ကနြျောလညျး မနနေိုငျတော့ဘူးလေ မမစနျး ကိုယျလုံးလေး ပှဖေ့တျအခနျးထဲ ဝငျသှားခဲ့တယျ ။ ခုထငျပျေါ မမစနျးကို လှဲ ထမီလေးခြှတျ လိုးရှငျးလူးလာတဲ့ မမစနျး စောကျဖုတျကွီးကို သခြောဖွဲ လြှာလေးနဲ့ ယတျ ကလိပေးလိုကျတော့တယျ ။ “အို မောငျလေးရယျ အား….” “ကောငျးလိုကျတာ “ စောကျစိလေး ပွူးထှတျနတောကို စုပျပေးလိုကျတယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “အမလေးလေး မောငျးလေးရယျ လုပျတကျလိုကျတာ အား “ “မမ အရညျတှေ ထှတျတော့မယျ မောငျလေး ခန ဖယျပေးအူး “ မမစနျးက သူ့စောကျ ဖုတျထဲက ထှတျလာတဲ့အရညျတှကေို သူ့လတျခုပျနဲ့ ခံပွီး အပွငျထှကျသှားတယျ ။ကနြေျာ့မှာ တောငျနတေဲ့ လီးကို ကိုငျထားပွီး အိပျယာပျေါ ပတျလတျလှနျ ကနျြရဈနခေဲ့တယျ ။နားမလညျ နိုငျစှာနဲ့ပေါ ။မမစနျး ပွနျရောကျလာတော့ ကနြေျာ့လီးလေးကို စုပျပေး တော့တာပဲ။ လီးပျေါက အေ၇ပွာလေး ထှနျး လီးထဈ လေးကို လြာလေးနဲ့ ယတျ။ ” အို မမ ရယျ ကောငျးလိုကျတာ “ မမစနျးက သူပါးစပျကွီးနဲ့ ကုနျးကုနျးစုပျ ပေးတယျ ။ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “အား မမရယျ တကျစောငျ့ပါတော့ “ မမစနျးက ကနြျော ပျေါကနေ လီးလေးကိုငျ သူ့စောကျဖုတျကွီးထဲ တပွေီ့း ထိုငျခလြိုကျတယျ ။ ဟော ဖငျလေးမွှောကျ ပွနျထု ကျလိုကျ ထိုငျခလြိုကျ ။ “မမ ရယျ မွနျမွနျလေးစောငျ့ “ စောကျဖုတျက အရညျတှေ ထှကျနတောဆို တော့. …. “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “”ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” မမစနျး မှာ ကိုယျလေး ညှတျ ကနြေိာပျေါ ကိုငျးကလြာတယျ ။ နို့လေးကိုငျခြေ ပါးစပျခွငျး စုပျ ။ မမစနျးကတော့ တငျလေး မွောကျပွီး ဖွေးဖွေးခငျြး စောငျ့ပေးတယျ
ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ မမစနျးကို ပတျလတျလှနျခိုငျးပွီး ဒူးလေးထောငျ သူ့ဖောကျဖုတျအဝကနေ ကနြေျာ့လီးလေး စောငျ့ထိုး ” အငျ့ ဗွှတျ “ “အာ့ မောငျး ဖွေးဖွေးစောငျ့ပါ “ “ဟုတျ မမ” လီးလေး အပွငျထုတျ စောကျဖုတျ အဝကနေ ဖွေးဖွေးလေး လီးအဆုံးထိ သှငျး ” အငှးးးးးးးးးးး” “အား အမလေးလေး ကောငျးလိုကျတာ မမ. အသားအိမျ ထိထိ သှားတယျ “ “အငှးးးးးး” “အား ကောငျးလိုကျမောငျလေးရယျ” ” စောငျ့ စောငျ့ လိုးတော့ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “ဗွှ တျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “အာ့ အာ့ အာ့ “ “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “အို့ အမလေးလေး မွနျမွနျစောငျ့လိုးပါတေါ့” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အာ့အာ့အာ့ အို့ အမလေးလေး” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” ” အငျ့. …” သုတျတှထှေတျခါနီး အသားကုနျ စောငျ့ခြ လိုကျတာ “အငှ့” “အမလေး “ ကနြျော မမစနျးပျေါ မှောကျခလြိုကျပွီး နုတျခမျးစုပျပေး မမစနျးက ကနြျောကို တငျးကွပျနအေောငျ ဖတျထားတယျ။ “မောငျလေး မမလေ ညတိုငျး မောငျလေးနဲ့ ခံခငျြတယျ” “ခွနေရေပေါ့ မမရယျ မောငျလေးလညျး မမကို ညတိုငျး လိုးပေးခငျြတယျ” “မောငျလေး မိနျးမ ရ ရငျ မမကို မမှေ့ာပါ” “မမနေို့ငျပါဘူး မမရယျ” “ခုလိုပဲ ခိုးခိုးလိုးကွတာပေါ့” “အငျးဟုတျတယျ ခိုးလိုးရတာ ပိုအရသာ ရှိတယျနျော မောငျလေး” ” ဟုတျ တယျ မမရဲ့” “မမ ခုနက အရညျတှေ ဘာလုပျတာလညျး “ဟို လူကွီး ဟာပျေါ သှားထား သူ့ပုဆိုး ရှဲအောငျ လုပျခဲ့တာပေါ့” “အျော ဉာဏျကောငျးပါဘိ မမ ရယျ ““မမ ကွကျဥနဲ့ စပါကလငျ သှားယူအူးမယျ ” ဟုတျ ခဈြမဝတဲ့ မောငျ့မမ ပွှတျ” “သှား လူဆိုးလေး” မမ ယူလာတဲ့ ကွတျဥစပါကလငျသောကျ ပတျ လတျလေး လှနျနေ ။ မမ က ကနြျောကို ဖတျထားတယျ။ ကိုယျတုံးလုံး နို့လေးတှကေ လာလာပှတျ ။ မမ အဖုတျလေး ကို လတျညှိး လတျခလယျ လတျသနျး ကွှယျ ၃ခြောငျးနဲ့ နှိုကျ ကလိ ။ မမ မှာ တှနျ့တှနျ့ တကျလာတယျ ။ ကနြျော လီးလေးကို မမ က ဂှငျးထု ပေး နတေယျ ။ ကွတျဥစပါကလငျ အစှမျးက လီး လေး တောငျလာပွီး မမက ကုနျးစုပျတေါ့ တာပဲ ။
“ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ “ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ “ 69 ပုံစံပွောငျး မမက ကနြေျာ့လီးလေးစုပျ ကနြျောက မမ စောကျဖုတျလေး လတျနဲ့ ထိုး လိုကျ စောကျစိလေး စုပျလိုကျ မမ အရညျ ထှကျခါနီးတော့ ဆငျးသှားပွီး ခါး လေးညှတျ ကုနျးပေးထားပွီး လိုးခိုငျးတော့တာပဲ ၊ မမ တငျကါးကါးကွီးကွား က စောကျဖုတျလေး ပွူထှတျ ကနြေျာ့ မာတောငျထနျနတေဲ့ လီးကွီး စောငျ့စောငျ့လိုးထညျ့ပဈလိုကျတယျ ။ “အငှ့” “အမလေ့း” “အငျ့” “အာ့ “ စောကျရညျ တှကေ ရှဲရှဲကလြာ စောငျ့စောငျ့ လိုး လို့ကကောငျး “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “အမလေး ကောငျးတယျ မောငျရယျ” “ဗွှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “အာ့ အာ့” မမက ကုနျးရာကနေ ညောငျးလာလို့ညှတျကသြှားပွီး ဘေးစောငျးလေး နပေေး ကနြျောလညျး ပေါငျလေး တဈဖတျမွောကျ လိုးပေးလိုကျတယျ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အို့ အမလေး အာ့ အာ့” အငျ့ “အာ့ လိုးတကျလိုကျတာ မောငျရယျ” မမကို ပတျလတျလှနျခိုငျးပွီး ခွေ၂ခြောငျထောငျ စုကိုငျပွီး လိုးထညျ့ “အငျ့ အငျ့” “အာ့ အမလေး ကောငျးလညျး ကေါငျးတယျ မောငျရယျ စောကျဖုတျနာတယျ” “မောငျ့ လီးမနာဘူးလား “ “ကပျြသလိုပဲ မမ” “ကပျြမှာပေါ့ စု ကိုငျထားတာကိုး ဗွဲပွီး အားရပါးရ လိုးလိုကျစမျးပါ မောငျရယျ”မမ ပေါငျ၂လုံး ကားပွီး အားရပါးရ စောငျ့ စောငျ့လိုး ထညျ့ “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “ဗှတျဗှ တျဗှတျဗှတျ”“အာ့ ကောငျးလိုကျတာ အမလေး” “ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” “အာ့ အာ့ အာ့ “ “မောငျလေး ပွီးအောငျ စိတျကွိုကျ စောငျ့လိုး တော့ ““ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ”ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ”ဗှတျ ဗွှတျ ဗွှတျ” ” အာ့ အမလေး အာ့ အာ့ အားးး” “အငျ့ “အားးးး” “အမလေး မောငျလေး ရယျ စောကျဖုတျလညျး နာပွီးကြိနျနပွေီ အိပျကွရအောငျနျော “မငျးလညျး ပငျပနျးနပွေီ” “ဟုတျ မမ “ကနြျောနဲ့ တူတူ အိပျမှာလား” “မမ ပငျပနျးနပွေီ မနကျမနိုးလောကျဘူး.ဟိုလူကွီး နားသှားအိပျတော့မယျ ။ မမ. မနကျမနိုးရငျ ဟိုလူကွီး သိသှားပေါ့” “ဟုတျ မမ” အပိုငျး(3) ဇာတျသိမျး ဆကျရနျ ” အခဈြ ကွီးသူ၏ မတ်ေတာ” စာဖတျသူတို့ရငျထဲ ဟာခနဲ ဟငျကနဲ ဖွဈသှားမဲ့ ဇာတျသိမျးပိုငျးလေး စောငျ့မြျော >>>>>
အပိုငျး(၁)ခရီးတဈညရဲ့စှဲမတျစရာ အပိုငျး(၂)မဝလသေော ရမ်မတျခြို အပိုငျး(၃) ဇာတျသိမျး “”အခဈြကွီးသူတို့၏မတ်ေတာ”” မနကျမိုးလငျးတော့ ထမငျးကွျောစား ကာဖယျသောကျပွီး အကိုကွီးနဲ့အတူ ရုံးသှားခဲ့တယျ ။ ညနေ စောစောလေး ရုံးက ပွနျလာပွီး အိမျရှမေ့ငျး ထနျးတောတကျသှားပွီး ထနျး ရသေောကျ ကွတယျ။ ကိုကွီးပဲ ချေါတာပါ ။ ထနျးတောထဲ သီးသနျ့နရောမှာ ထိုငျ ထနျးရေ တဈမွူ မှာလိုကျတယျ ။ ကိုကွီးက မထငျမှတျပဲ စကာတှေ ရငျဖှငျ့လာတယျ ကနြျော အရမျးအံ့သွ မိတယျ ။ “ညီလေး….” “ဗြာကိုကွီး..” “မနညေ့က မငျးနဲ့ကိုယျ့မိနျးမ. ……” “ဗြာ…..” ကနြျော အံ့သွ တာထကျ တုနျလှုပျ ခွောကျခွား လိပျပွာမလုံ ဓားခံရတော့မလား ဗိုကျတှတေောငျ ယားလာတယျ။ “မအံ့သွပါနဲ့ ညီလေး ..အကိုခှငျ့လှတျတယျ” “ဒါပမေဲ့ မငျးကတိ တဈခုပေးရမယျ..ငါ့မိနျးမ မငျးမမ ပေါ့ကှာ. .သူကို ကိုယျဝနျယူအောငျ မငျးပွောပေးရမယျ “ “ဘယျလိုဘယျလို…ကိုကွီး” “အကိုတို့လငျမယား အစက သိပျခဈြတာ စီးပှားရေးအရငျစု ကလေးနောကျမ ယူမယျပေါ့ကှာ”“လှနျခဲ့တဲ့6လ လောကျက အကို့ပနျးလုံးဝ သသှေားခဲ့” “ဗြာ….ကိုကွီး မကုဘူးလား” “ကိုယျ့မိနျးမနဲ့မဆကျဆံတာ ၁နှဈကြျောပွီ” “အစက သူကို့ကလိ ခနပဲတောငျလာ မလုပျဖွဈ ပနျပွီး သသေသှေား” “သူ့လညျးမပွော ကြိတျကုရငျး လှနျခဲ့ တဲ့ 6လလောကျက လုံးဝသသှေားတာ” ” ဒါလညျး အကိုအပဈတှပေါ ။ အကိုက အလုပျကွိုးစား ငယျငယျနဲ့ မနျနဂြောဖွဈ ရနျကုနျမှာ သိတဲ့အတိုငျး ကလပျ သှား ရုံးက တပညျ့လေးတှစေညျးရုံးပွီးအရကျတှအေရမျးသောကျ ကုမဏီကဆျောလေးတှကေိုလုပျတှသေမြှဖာလဲအကုနျလုပျ အဲဒီမှာ သူတိုစီကကူးတဲ ရောဂါယောကျကငြ်္ားရေားဂါစဖွဈတာအကုနျသောကျလုပျခဲ့တဲ့ ဒဏျတှပေေါ့ကှာ” “ဒါနဲ့ မနညေ့က မမနဲ့ကနြေျာ့ကို ဘယျလို သိတာလညျး ကိုကွီး” “အကို အရကျသောကျရငျ ဘယျတော့မှ မမူးဘူး ၊ ပနျးသေ လို့မိနျးမကို မဆကျဆံ နိုငျခြိနျကစ သောကျတယျ အရကျမူးခငျြယောငျဆောငျတယျ မိနျးမ နောကျမီးလငျးလား သိခငျြလို့မူးခငျြယောငျဆောငျတာ ။”
“တနှဈအတှငျး မိနျးမလညျး နောကျမီး မလငျး ပါဘူး” “မူးလို့အိမျကို ဘယျဧညျ့သညျချေါလာလာ သူ့မကွိုကျဘူး ပှဲကွမျးတယျ “ “ဧညျ့သညျလညျး လနျ့ ပွေး” “မငျးကို ချေါလာတော့ သူဘာမှမပွောတာ သတိထားမိတယျ”ထမငျးခတျြခိုငျးတော့ မငွငျးဘူး” “အရငျကဆို အပွငျမှာကြှေးပါလား ဘာဖွဈတယျ ညာဖွဈတယျပွောတာ” “အကို အရကျဘယျတော့မှမမူးတဲ့သူ မနညေ့က ထမငျးစား လိမ်မျောရညျသောကျပွီး အိပျတာ မိုးတလငျး” “မိုးလငျး အကို နိုးတော့ အကို့ပုဆိုးနဲ့ ငယျပါမှာ အရညျရှဲနတေယျ ““မငျးအခနျးထဲဝငျတော့ ငါ့မိနျးမ ခေါငျးစညျး ကွိုးရယျ အောကျခံဘောငျးဘီ တှတေ့ယျ” “မငျးကလညျး ကိုယျလုံးတညျး” “ကဲပါ ဒါတှထေားလိုကျပါတော့ မငျးမမကို ကိုယျဝနျဆောငျဖို့မငျးသခြောပွောပွ တာဝနျယူပေး အကို အကုနျခှငျ့လှတျပါတယျ” ကနြျော နဲ့ကိုကွီး လညျး ထနျးရညျသောကျ လလေေးတဈဖွူးဖွူး ခေါငျးလေးက ရီဝေ ရီဝေ လမျးလေးလြောကျပွနျလာခဲု့ကတယျ လမျးမှာ စားသောကျဆိုငျတဈခု ဝငျ ဒနျပေါကျ၃ ထုပျ အကိုကွီးဝငျဝယျပွီး အိမျကို ပွနျလာခဲ့တယျ။
“ရှငျတို့ မူးလာကွပွီလား နှဈယောကျလုံး” “ကလေးကို ပါဖတျြဆီးလာတာပေါ့” “ထနျးရညျလေး နညျးနညျးတိုကျတာပါ ဘာမှဖွဈဘူး မိနျးမ ရော့ ဒနျ ပေါကျ စားကွမယျ ပွငျတော့” ထမငျးဝိုငျးမှာ အတူစားကွပွီး အရကျတဈလုံး ဝယျလာကါ ထပျသောကျနတေယျ “ “ကလေးကို ထပျမတိုကျနဲ့တော့ “ “စိတျခပြါ လုံးဝမတိုကျဘူး “ မမစနျးက မသောကျတော့နဲ့မပွောပဲ ကနြျောကို မတိုကျဖို့သာပွောတယျ။ ကိုကွီးကတော့ မထတေ့ထေ့ စကားလုံးတှေ ပွော တော့ ကနြျောအနရေခတျလာတယျ။ ခှတျကွမျးခြ ခနနဲ့ တဈလုံးကုနျ မူးလာပွီး ထသှားတဲ့ နောကျဆုံးစကားလေးက ကဗြာဆနျသှားတယျ။ ” တိကတြဲ့ ဒီည ငါ့ဘဝရဲ့ အဖွဈမှနျ တဈကို တညျးပဲ အိပျစကျရနျ စိတျအမှနျကြိတျခံလို့ နိဗ်ဗာနျသို့မူးစသေတညျး” မမစနျးကတော့ “ဒီအမူးပေါကျကရလြောကျ ပွော ပွီး အိပျတော့မယျ “ “မငျးလညျး ရခြေိုးတော့ မသောကျတကျပဲ လြောကျသောကျ” “နအေူး ထမငျးစားပွီး တနျးမခြိုးနဲ့ ခနနအေူး” မမစနျးကတော့ ပနျးကနျ တှဆေေး ကနြျောက TVဖှငျ့ကွညျ့နလေိုကျတယျ ။ မမစနျး ပနျးကနျဆေးပွီး ကနြေျာ့ကို ရခြေိုးခိုငျးတယျ။ “မောငျလေး ရခြေိုးတော့ “ “ဟုတျ “ ကနြျော လညျး ရခြေိုးခနျးဝငျ ရခြေိုး လေးငါးဆယျခှကျလောငျ ဆပျပွာတိုကျနတေုနျး မမစနျးက တံခါးလာခေါကျ ဖှငျ့ခိုငျးတယျ ။ ကနြျောလညျး ဖှငျ့ပေးလိုကျတယျ။ မမစနျး က ထမီရလြေားနဲ့ ရအေတူတူခြိုးမယျတဲ့၊
ကနြေျာ့ကို အတငျးဖတျ နှုတျခမျးတှေ စုပျတော့တာပဲ။ “ပွှတျပွှတျပွှတျ” “ပွှတျပွှတျပွှတျ” “ပွှတျပွှတျပွှတျ” ကနြျောလညျး မမစနျးထမီကို ခြှတျနို့အုံတှေ ကိုခွေ နို့သီးလေးလေးခွခွေပေေး တဈဖတျက မမစနျးစောငျဖုတျကွားလေး မွောငျးထဲ အပျေါအောကျဆှဲပှတျပေး မမစနျး ကလညျး ကနြျောလီးကို ဂှ ငျးထုပေး လီးက တငျးတောငျလာတော့ မမစနျးက သူ့စောကျဖုတျထဲတေ့ ကာ ကနြျောကို အတငျး ဖတျထားတယျ။ကနြျောလညျး မမ ကို နံရံကပျ ခွတေဈ ဖတျ ပေါငျကနမွှေောကျ ကိုငျ လိုးပေးလိုကျတယျ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အာ့ ကောငျးလိုကျတာမောငျရယျ အလို ပထမဆုံ ခံဘူးတာ တဈမြိုးလေးပဲ” “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အငျ့ အငျ့ အငျ့ “ “အာ့ အာ့ အာ့” နှဈယောကျသား ထိုငျခလြိုကျပွီး မမစနျးက စောငျ့ပေးတယျ အဖုတျက အရညျတှေ ထှကျ မမစနျးကလညျး အရမျးစောငျ့ “ဗှတျ ဗှတျ ဗှတျ” “ဗှတျ ဗှတျ ဗှတျ” “ဗှတျ ဗှတျ ဗှတျ” “အား မမရယျ ကောငျးလိုကျတာ” “မောငျလေးရယျ ပွီးသေးဘူးလား “ “ဗှတျ ဗှတျ ဗှ တျ” “အာ့ အူး မမ ရယျ”“မမ ရကေနျပျေါ လတျထောကျကုနျးလိုကျ” “အငျး “ မမစနျး တငျပါးကွီးကွီး ကွီးတှကေိုငျ စောငျ့ စောငျ့ လိုး“အငျ့ ဗှတျ အငျ့ ဗှတျ အငျ့” “အ့မလေး မောငျနျော ခုနောကျပိုငျး အစောငျ့ကွမျးတယျ “ “အငျ့ ဗှတျ အငျ့ ဗှတျ အငျ့” “အ့ အ့ အ့” ပွီးခါနီး မမစနျးခါးဖတျပွီး အဆုံးထိစောငျ့ လိုးလိုကျတယျ“အ့မလေး……..အငျး” “မမ ခန စိမျထားမယျ” “မောငျ့သဘော…အအေးပတျအူးမယျ” “အငျးပါ “ အတူ ရခြေိုး သူ့ကိုယျပှတျဆပျပွာတိုကျ ကိုယျ့သူပှတျ ဆကျပွာတိုကျ ဖီးက တကျပွီးရငျးတကျနတေော့ တာပဲ။
“ဟှနျ့တျောဦးမောငျ . အအေးပတျမယျ” ရခြေိုးပွီး မမက သခြောကို တဘကျနဲ့ရစေငျအောငျ သုတျပေးတယျ ။ အခနျးထဲအေးဆေး နား ။ မမစနျးကလညျး သနပျခါးလေးလူး မထီရလြေားနနေဲ့ လိုးရှငျ လူး ပေးဖို့ကနြျော အခနျးထဲလာ ။ ကွတျဥ၂လုံးပါယူလာပေးတယျ။ ကနြျောလညျး မမစနျးကို စိတျတိုငျးကွပှတျ လိမျးပေးနလေိုကျတယျ ။ “မောငျ. ..လိုးခငျြနပွေီလား” “မမ သဘောမမဆန်ဒလေ” “ခန နားအူးမယျလေ ရော့ မောငျကွတျဥသောကျနှငျ့မမ အကငြ်္ီ သှား ဝတျအူးမယျ” “ဟုတျ “ မမ အကငြ်္ီဝတျပွီးပွနျလာပွီ။ဘျောလီတောငျ မပါဘူး။ ပတျလတျလှနျနတေဲ့ ကနြေျာ့ကို အတငျးဖတျ နို့၂လုံးနဲ့ ပါးစပျလာထိုး ပေး စနတေယျ ။ ကနြျောလညျး မမအကငြ်္ီမခြှတျ နို့လေးကိုငျ စို့။ မမသာယာနလေိုကျတာ ။ မမ ကို အတငျးဖတျ ဘေးတစောငျး မတျြနှာဆိုငျ ဖတျ နှုတျခမျး လေးစုပျ မမကို နားခရြတော့မယျပေါ့ ။ “မမ. ..” “ပွောလေ. မောငျ” “မမ တားဆေးထိုးထားတာလား ဆေးစား တာလား” “ဟိုနကေ ဆေးစားထားတယျ ဘာဖွဈလို့ လညျး” “မစားပါနဲ့တော့ မမ ။ မမ ခလေးယူလေ” “ဘယျဖွဈပါ့မလညျး ဟိုလူကွီး သိသှားမှာပေါ့” “ကိုကွီးက သိတယျ မမရဲ့..ညနကေ ကြ နေျာ့ အကုနျပွောပွတယျ” “မမနဲ့သူ မဆကျဆံတာ ၁နှဈကြျောပွီ “ “ဟောတေျာ့ တကယျပွောပွတာလား” “ဟုတျတယျ မမရဲ့၊ မမဆန်ဒကို သူလုံးဝ မ ဖွညျ့ဆညျး ပေးနိုငျတော့တဲ့ အခြိနျ လှနျခဲ့ တဲ့6လလောကျက စပွီး သူ အရကျကို နတေိုငျး သောကျလာခဲ့တယျ “
“အေး အတာဟုတျတယျ “ “တကယျ တော့ သူ မမူးပါဘူး မမ ကို အကဲ ခတျတဲ့စောငျ့ကွညျ့ရုံ သတျသတျ သောကျတာ” “မမလညျး သူပျေါသစ်စာရှိတယျ လို့ပွောတယျ” “ဒါပမေဲ့ ကနြျောနဲ့ကွ မမက စိတျပါသှားတယျတဲ့” “အ့ ရထားပျေါမှာလေ ရှငျလေးက လူကို လာထောကျတာကိုး” “ခခြ “ “လငျနဲ့တနှဈကြျော မဆကျဆံရတဲ့ မိနျးမ အထောကျခံ ရတော့ ဆာလာတာပေါ့. “ “ပွီး ရှငျလေးက အပြို အအို မခှဲတကျတဲ့ အရိုငျးလေးဆိုတော့ ကြုပျမခှဲနိုငျဘူးပေါ့” “မမ အဆို ကလေးယူပေးလိုကျပါနျော .၊ ကို ကွီးနဲ့မမ အရငျက ကလေးအရမျးလိုခငျြ ကွတာတဲ့ စီးပှားရေးကွောငျ့ မယူဖွဈကွတာဆို “ “အငျး ဟုတျတယျ “၊မမ ပေးပါအူးမယျ မေါငျ ကရော မောငျ့ ကလေးကို အဖဆေိုတဲ့ ချေါပိုငျခှငျ့ မလိုခငျြဘူးလား ၊မမ နောကျပိုငျးမှ အရှတျခှဲတာ မလိုခငျြဘူး” “မမရယျ မမတို့ဘ၀ ပြျောရှငျပိုငျဆိုငျရငျ ကနြျော ဘယျလိုနရေနရေ နနေိုငျရမှာပေါ့”“ကိုကွီး ပူပနျနတောက မမ အခွားတဈယောကျနဲ့ နပွေီး သူ့ကိုခှဲသှားမှာ စိုးရိမျနတေယျ “ “သူကပွောတယျ မမ ၊မမ ကိုယျဝနျရတဲ့နကေစ သူအရကျဖွတျ မယျတဲ့” “သူသားသမီးအရငျး မဟုတျမှနျး ကနြျောတို့၃ ယောကျပဲသိတာ” “သူလတျခံနိုငျတယျတဲ့၊ မိသားစုဘဝရယျ နောကျ မမက မိခငျဘ၀ နဲ့ တညျငွိမျပွီး သာယာတဲ့ဘဝကို သူလိုခငျြတယျတဲ့” “အငျးလေ သူတောငျ စိတျထားကွီးတာပဲ မမ ကလေးယူပေးပါ့မယျ” “မငျး လေးကလညျး ပွီးခါနီး သုတျကို စောငျ့စောငျ့ထညျ့နတော ၊ ဆေးစားလညျး ရပါ့မလား မမ တှေးပူကွောကျနတော” “ခုတော့ မမ ဆေးမစားတော့ဘူး ဟုတျ ပွီလား ခဈြလငျငယျလေးရယျ”
“ဟားဟားဟား” “ရယျပါနဲ့ ဟှနျ့ရှငျလေးက မိနျးမယူသှားရငျ ကြုပျက အသညျးကှဲရအူး မယျ” “မမရယျ ရငျထဲက မတ်ေတာ အမွဲ ရှိနဖေို့ပါ” “မမ ကနြျောနဲပဲ တဈညလုံးအိပျတော့နျော” “ဖွဈပါ့မလား. တျောကွာ ဟိုလူက အခြိုသတျ ၂ယောကျလုံးသတျနမှေဖွငျ့” “မမ ကနြေျာ့ခဈြလား” “ခဈြတာပေါ့ မောငျရယျ “ “ဒါဆို ကိုကွီး အခြိုသတျတယျဆိုလညျး ၂ယောကျ အတူသခေံနိုငျတယျပေါ့” “အငျးပါရှငျလေးရယျ ရှငျနဲ့အတူအိပျပါ့မယျ “ခဈြလိုကျတာ မမရယျ” မမ နှုတျခမျးလေး စုပျပေး အကငြ်္ီလေး လှနျ နို့လေးတှခွေေ မမကလညျး ကနြေျာ့လီးလေး ဆှပေးနတေယျ။ မမ ထမီကို ခြှတျ အဖုတျလေး ကိုငျတော့ အရညျ လေး စို့နပွေီ ။ ကနြျောလညျး မမပျေါ တကျမှောကျ မမက လီးလေးကိုငျ အဖုတျလေးတေ့ ကနြျောလညျး ထိုးသှငျး လိုကျတယျ” “အငှးးးးးးးး” “အားးးးးး” “အငှးးးးးးးး” “အားးးး” “အငှးးးးးးးး” “အားးးးး” “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့” “အာ့ အာ့ အာ့ အာ့” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့” “ဟှငျ့ ကွမျးထြာ ဖွေးဖွေးလိုး” “အငျ့ “ “အာ့ “ “အငျ့ “ “အာ့ “ “ပုံစံပွောငျးမလား မောငျ” “မပွောငျးတော့ဘူး မမပွောငျးခငျြလား” “မောငျ့သဘောပါ “ “ဒူးလေးပဲထောငျ လိုးတော့မယျ” “အငျ့ အငျ့ အငျ့” “အာ့အာ့” “အငျ့ အငျ့ အငျ့ အငျ့” “ဗှတျ ဗှတျ ဗှတျ ဗှတျ” ” အမလေး အာ့ အာ့ “ “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့ အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့အငျ့” “အမလေး အားးးးး’” ” အငျ့ “ “အမလေး အားအား ၊ အို အရညျတှေ ထညျ့လိုကျတာ ၊ မောငျရယျ “်မ မမ ထဲစိမျထညျ့ပွီး မမပျေါ မှောကျဖတျထားလိုငျတယျ ။ မမက လညျး ကြ နေျာ့ကို အတငျးဖတျထားတယျ ။နှုတျခမျးတှစေုပျ အတူစုပျနလေိုကျတယျ” “မောငျ မောလား” “မောတာပေါ့ မရဲ့ “ “ချချ လီးထုတျတော့လေ “ “တရေးနိုးမှ ထကျလိုးတော့ “ ကနြျောလညျး မမ ပျေါကဆငျး မမကို ဖတျခှ အိပျနလေိုကျတော့တယျ ။ ၂နာရီထိုးလောကျ တရေးနိုးတော့ မမ က ဘေးစောငျ ကနြျောက ပတျလတျနှဲု့။ဘေး စောငျနတေဲ့မမ ထမီမပါ တငျပဆုံကားကား ကွီးမွငျတော့ လီးက တောငျလာပွီး မမကို ဖတျလိုကျတယျ ၊မမလညျး နိုးလာပွီး တငျလေး က အလိုကျသငျ့ ကပျလာတယျ ကနြျောလညျး နို့လေးတှပေျေါ လတျရောကျ မမကလညျး ကနြျောလီးလေးကိုငျ အဖုတျထဲတပေ့ေးတယျ ။ နောငျကနေ ပဲ ပု ဇှနျကှေး လိုးပေးနပွေီး ပွီးခါနီးမှ မမကို ပတျလတျလှနျ စောငျ့လိုးပွီးလိုကျတယျ။
မနကျမိုးလငျးတော့ ကိုကွီးကကနြေျာ့တို့ကို လာနှိုးရတယျ ။ မမကတော့ မတျြနှာပူနရှောတယျ ။ ထမငျးကွျောတှေ လဘကျရညျတှလောခပြွီး မီးဖိုခြောငျထဲ သှားနတေယျ ။ ကနြျောတို့လညျး ရုံးသှား ပုံမှနျလုပျ ညနကွေ ကနြျောက အဆောငျပွနျ အဝတျအိပျယူနတေယျ ။ကိုကွီးက အရငျပွနျနှငျ့ ။ မမစနျးကတော့ သူယောကျြား ကို ကနြျော မလားတော့ မမေး ။ ကိုကွီးက သူ့မိနျးမ အနထေားသိပုံ ရလို့နမှော အဆောငျမှာ အဝတျအိပျ ဝငျယူ နတေယျ ငါ အိမျမှာနတေော့ ပွောလိုကျတယျ။ ကနြျောလညျး မမစနျးကို တဈကယျခဈြတာ လား ကာမ ဆန်ဒကွောငျ့လား စှဲလနျးတာတော့ အမှနျ ။ တဈရကျနှဈရကျတော့ ၃ယောငျသား မတျြနှာခငျြးဆိုငျ စကား မပွောဖွဈကွ ။ အထူးသဖွငျ့ မမနဲ့ကိုကွီး စကားနညျးသှားကွတယျ ။ ဟုတျတော့လညျး ဟုတျတယျ နားလညျရ ခတျခတျကွီး။ ညနတေိုငျးကိုကွီးက သောကျလာတယျ ၊ ထမငျးတော့ အတူစားကွတယျ စကားတှေ သိပျမပွောဖွဈကွ။ မမက အိမျအလုပျပွီး ကနြျော လာအိပျတယျ ။ ဒီ လိုနဲ့ မမ ကိုဝနျ ၃ လ ရလာတော့ ကိုကွီးလညျး အရကျဖွတျလိုကျပွီ ၊ မမကိုလညျး ဂရုစိုကျလာတယျ ။ ကနြျောက အိမျမှု့ကိစ်စအကုနျတာဝနျယူလိုကျတယျ။ မမကို ဘာမှမလုပျခိုငျးတော့ ။ တဈခါတလေ စကားဝိုငျးမှာ ၃ ယောငျသား စနောကျနကွေသေး ။
“ငါ့မိနျးမ အရမျးကံကောငျးတယျ လငျ၂ ယောကျ ဂရုစိုကျတာ ခံရတယျ “ “ရှငျတို့လညျး ဘယျလိုရစေကျကွောငျ့ ဒီလို နားလညျ မတ်ေတာကွီးနမှေနျးမသိဘူး” “မမက ကံကောငျးတာနျော” “ညီဇျောဇျော မငျးက ဝဋျခံနရေသလိုပဲ” “အလိုလညျး မဟုတျပါဘူး အကိုကွီးရာ ကနြျော တို့က မိသားစုတှပေဲလေ “ “ငါရုံး က ကောငျမလေးတှေ စညျးရုံး မငျးအနားကပျခိုငျးတယျ ။မငျးက လုံးဝ စိတျမဝငျစား”မမ မှ မမဖွဈနတောလေ” “မမက ကိုယျဝနျနဲ့လေ သူစိတျဆငျးရဲရငျ ကလေးအတှကျ မကောငျးဘူး တကယျလညျး ရုံးကကောငျမလေးတှေ စိတျမဝငျစားလို့ပါ” “အောငျမယျ နငျက ကလေးအဖဖွေဈတော့ မှာနျော “စိတျဝငျစားစရာလား” “မစနျးရယျ မပွောပါနဲ့ “ “သူ့ကို တမငျစတာပါ “ “တဈယောကျမတ်ေတာ တဈယောကျ နားလညျပွီး ဒီမိသားစု ထာဝရပြျောရှငျဖို့ မောငျလေး မငျးကို မမ ညီမနဲ့ပေးစားမယျ” ဒီလိုနဲ့မမစနျးကိုယျဝနျ၆လ ရတော့ သူညီမ သငျးသငျးနှယျနဲ့ ဇျောဇျောကို လတျထပျပေးလိုကျတယျ ။ နားလညျမှု့ အပွညျ့နဲ့ မိသားနှဈစု တဈအိမျထဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျသိုကျသိုကျဝနျး ဝနျး နထေိုငျသှားခဲ့ကွလပွေီ ။
ဂျူန်းဂျူန်း ဂျတ်ဂျတ်……….. ရန်ကုန်ကနေ မန်းလေးရထားကြီးဆန်တက်လေပြီ ဇော်ဇော်တစ်ယောက် စာရင်းကိုင် ၁ ဘဝနဲ့ရန်ကုန်ကနေ မန်းလေး ကုမ္မ ဏီ ရုံးခွဲကို ပြောင်းရွေ့ရတယ်။ ကားလတ်မှတ်မရလို့ရထားနဲ့လိုက်ခဲ့ရတယ် ။အထူးတန်းကုန်လို့ရိုးရိုးတန်းကသာ စီးခဲ့ရတယ် ။ မျတ်နှာချင်းဆိုင်က အဖိုး အဖွားလင်မယား ဘေးနားမှာက ၃၅ နှစ် တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် မစန်းနဲ့အတူ တွဲထိုင်လာရတယ်။ မစန်းက အရမ်းဖော်ရွေတယ်၊ ခုမ သိပေမဲ့ အရင်း ခြာအသိမိတ်ဆွေလို ပဲ။ စကားပြောရင်လည်း ပေါင်လေးပုတ် ပုခုံးလေးပုတ် ပူးပူးကပ်ကပ် သိပ်ပြောတက်တာ ။ မျတ်နှာချင်းဆိုင် အဖိုးအဖွားကဆို အရွယ် ကွာတဲ့ လင်မယားလို့ထင်နေကြတာ ။ ဟုတ်တယ်လေ မစန်းက မုန့်တွေ ကျနော်မစားရင် အထင်ခွန့်ကျွေးတာ ။သူယူလာတဲ့ ထမင်းကိုလည်း ၂ယောက် အတူ စားကြတာ။ ညရောက်တော့ မစန်းက အဖွားတို့ကို ခုံမှာ နေရာပေးပြီး သူနဲ့ကျနော် အောက်ဆင်းအိပ် ကြတယ်။မစန်းက သူ့ယူလာတဲ့ အခင်း လေးခင်းပေးတယ် ။ ကျနော်ကတော့ အဖိုးခုံ အောက်ဝင်နေရာယူလိုက်တယ်။ မမ စန်းက ကျနော့်ဘေးကပေါ့။ တဖတ်လည့် စောင်းစောင်းလေးကျော ပေးနေတယ် ။ ရထားက ယိမ်း သူ တင်ကြီးတွေက ကျနော့်ကို အတင်းလာလာတွန်းတယ် ။ ကျနော့် ငပဲကလည်း ဘာပြောကောင်းမလည်း မတ်လာတာပေါ့ ။ ကျနော်လည်း အတွင်းခံ ဘေးကနေ ထုတ်ပေး မမ စန်း တင်ကြီးတွေကြား ထောက်ပေးထားလိုက်တယ် ။မမ စန်း သိနေတယ် နောက်ကို အတင်း တိုးတိုးကိုလာတာ။ မမ စန်းသတ်ပြင်းတွေချ ။ ခနနေတော့ မမ အိမ်သာ သွားအူးမယ် ဆိုလို့လိုက်ပို့ပေးရတယ် ။ လူသွားလမ်းမှာ ကလည်း သိတဲ့အတိုင် အ လူကြပ် အိပ်သူကအိပ်။ မမစန်းက ခါးလေးကုန်း လူရှင်းလိုက်။ ရထားအလှူပ်နဲ့ ကျနော်က နောက်က စောင့်လိုက် ။မမ စန်းက ပြန်လှည့်ပြီး တိုးတိုးလေး
” စိတ်ထိန်းနော် မောင်လေး” အိမ်သာထဲ ခနလေး မမ စန်းဝင်ပြီ ပြန်ထွတ်လာတော့ သူလတ်ထဲက သူအတွင်းခံလေး ချွတ်လာပြီး ကျနော့် ပုဆိုးခါးကြား လိပ်ယူ ခိုင်းတယ် ။ နေရာပြန်ရောက်တော့ အဖွားက ကလေးတို့လင်မယား က အဖွားတို့ငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲတဲ့။ မမစန်းက မငြင်းပဲ ရီနေတယ် ။ နေရာလေး ပြန်ယူ အိပ်တယ်။ မမစန်းက သူ့အထုပ်ထဲက စောလေးယူ ကာ ၂ ယောက်အတူခြူံပြီး ဘေးတစ်စောင်း လှည့်ပေးထားတားတယ် ။ကျနော် လည်း နောက်ကနေဖတ် မမစန်းနို့လေးတွေကိုင်ပေးနေတယ်။မမစန်းက သူ့ရှပ်အက်ျီအပေါကြယ်သီး ၂လုံးဖြူတ်ပေးတော့ ဘော်လီကြားကနေ နို့ အတွင်းသားထိကိုင်ခြေပေးနေတုန်း မမစန်းက သူ့ထမီလေးအလိုက်သင့်အောက်လျော့ပေး ကျနော်လည်း ပုဆိုးလေးလျောချ ဘောင်ဘီကို ပေါင်ထိ လျော တောင်နေတဲ့ လီးကြီး မမ စန်း တင်ကြားကြ ပြူနေတဲ့ အဖုတ်ထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တယ် ။ ရထားအယိမ်း မမစန်းကလည်း အတင်းနောက်ကပ် ။ ခနနေတော့ ကျနော့်သုတ်ရည်တွေ မမစန်း အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီလေ။မမစန်း အသာမပြေနိုင်။တိုးတိုးလေး “မောင်လေး လီးမထုတ်နဲ့အူး ထိုးထည့်ထား” “ဟုတ် မမ” “တစခွါမ မလိုးဘူး ဘူးလား” “ဟင့်အင် ခုစလိုးတာ အားလည်းမရ လီးလည်းနာတယ် မမ” “ချချ” “မမက အပျိူကြီးလား ကြပ်လိုက်တာ” “အင်းပေါ့ မမလည်း မင့်လီးတောင့် အဖုတ်က အရည်ထွတ်ခံချင်လာတာ” ကျနော် လီးလေးက တဖြေးဖြေး မမစန်းအဖုတ်ထဲက သူ့အလိုလိုပြန် ထွက်လာ ပြီ ။ မမစန်းက ကျနော်ဘက်လှည့်လာပြီး သူ့နို့တွေ စို့ခိုင်း ကျနော်လီးလေး စွပေးနေတယ် ။
ခနနေ လီးလေး ပြန်တောင်လာတော့ မမစန်း ပြန်လှည့် ကျနော်လီးလေးကိုင် သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး နောက်ကို အတင်းကပ်ကပ်လာ ရထားက ယိမ်း ကျနော်လည်း အားမရ ဖြစ်သလိုစောင့်လိုးရ ခုံနဲ့စောင်မိလို့လည်း နာပေါ့။ဒုတိယချီဆိုတော့ နည်းနည်းကြာတော့ မမစန်းစောက်ဖုတ်ထဲကလည်း အရည်တွေ အများကြီးထွက် ကျနော်လည်းထွက် ပြှိူင်တူပြီး ဖတ်အိပ်လိုက်တယ် ။ အရမ်းအိပ်ပျော်သွားတာ ။ မိုးလင်းတော့ မမစန်းက တောင် နှိူးယူရ တယ် ။ မန်းလေးရောက်တော့ မမ စန်းက သူ့အိမ်ခေါ်သွားတယ် ။ကြတ်ဥ၂လုံးယူလာပြီး ဖောက်တိုက်။ သူ့အခန်းထဲ ခေါ် ကျနော့်လီးကို စုပ်တော့တာပဲ။ သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ လီးက ချတ်ခြင်းတောင် မမစန်း ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်က စောင့်လိုး အင့် အင့် အင့် အာ့ အာ့ အာ့ “မောင်လေးက ခုကြ အလိုးကောင်း တယ် ချစ်လိုက်တာမောင်လေးရယ်” ကျနော်လည်း အောကားတွေ ကြည့်ဘူးတော့ မမစန်းကို ကုန်းခိုင်ရာကနေ ပတ်လက်လှန် ပေါင်တစ်ချောင် ထောင် ပြီး စောင့်စောင့်လိုး အင့် အင့် အင့် အာ့ ကောင်းလိုက်တာ မောင်လေးရယ် မမစန်းကိုအပေါ်က နေစောင့်ခိုင်း မမစန်းက အပေါ်ကနေ ကုန်းစောင့် သူ့နို့ တွေ ချေကျနော်လည်း အောက်ကကော့စောင့် အာ့ အာ့ အာ့ မမစန်းအရည်တွေထွက် ခန္ဒာလေးပျော့လာပြီး မစောင့်နိုင်ပဲ ကုန်းကုန်းလေး ကျနော့်ပေါ် မှောက်ချလိုက်တယ်။ မမစန်း နုတ်ခမ်းလေးစုပ်ပေးပြီး လိမ့်ချကာ ပေါင်လေး ၂လုံးထောင် စောင့်စောင့်လိုး အာ့ ကောင့်လိုက်တာ မောင်လေးရယ် အရည်တွေနဲ့ ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် ဖတ်. ဖတ်. ဖတ် အင့်. အင့် အင့် အာ့. အာ့. အာ့ ကျနော် သုတ်ထွက်ခါနီး အသားကုန်စောင့်လိုးထည့်လိုက်တာ “အေမ့” မောင်လေးရယ် လိုးချတ်ကတော့ အရမ်း ကြမ်းတယ် မမ မခွဲနိုင်တော့ဘူး။နလည် ၂ နာရီလော၇် ကုမ္မဏီ အဆောင် ရောက် ကုမ္မဏီရုံးခန်းသတင်းပို့ မန်နေဂျာ ဦးထွန်းမြင့်က အရမ်းဖော်ရွေတယ် ။ ခရီးပန်းလာတော့ နားခိုင်းတယ်လေ ။ညနေရုံးဆင်း ၄ နာရီလောက် ဦးထွန်းမြင့် အဆောင်ရောက်လာတယ်။
“အသစ်လေး ညီ လေး ဇော်ဇော်” “အကို့ကို မပြူစုချင်ဘူးလား” အင်းစကားခေါ်လာတော့လည်း လိုက်ပြူစုရတော့မယ့် ပေါ့ “ဟုတ်ကိုကြီး ကြိုက်တဲ့ ဘီယာဆိုင်သွား” ဘဲကြီးက အလိုမဟုတ် သူ့သွားနေကြ ဘီအီးဆိုင် ကိုယ်က မသောက်တက် တစ်ယောက်ထဲ တစ်လုံးခွဲ ချလိုက်တယ် ။ သူ့မိန်းမ အလှပြင် ကြောင်း သူ့ကိုကြဂရုမစိုက် သူ့အလှပဲ ပြင်ကြောင်း ဒါ့ကြောင့် သူ နေ့တိုင်း အမူးသောက်ကြောင်း သာလိကာနဲ့ဇရက် ပေါင်ဆက်ထားသလို ပြောတော့တာ ပဲ ။ လူမှန်းမသိတော့လို့သူ့အိမ်လိုက်ပို့တာ ကျနော်ရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ မမစန်းအိမ် “သေနာကြီး မူးလာပြန်ပြီ ဧည့်သည်ပါလို့ကျူပ်ငြိမ်နေလိုက်မယ်” “အေ့ ….ဟုတ်တယ် ငါ့ညီလေး အသစ်ငါ့ရုံးက ဒီနေ့မှ ရန်ကုန်က ပြောင်းလာတာ” “ညီလေး ဒီမှာ ထမင်းစား ညအိပ် မနက် ကိုကြီးနဲ့ အတူ ရုံးသွားမယ်” ” ရပါ တယ် ကိုကြီးရယ် အဆောင်ပြနအိပ်ပါ့မယ်” ” နိုးနိုး ဒီမှာ အိပ် ညီ” ” မိစန်း သွား ထမင်းချတ် ဟင်းကောင်းပစေ ” ညီလေး အကိုနည်းနည်း ယူလိုက်အူး မယ် “ဟန်ဆောင်ရပေမဲ့ မမစန်းကို ထိတွေ့ချင်သေးတယ် ။ ဘဲကြီးက မူးပြီး သူ့အိပ်ယာပေါ် မှောက်နေပြီ ။ မမ စန်း မီးဖိုးချောင်ထဲ လိုက်သွားပြီး ” မင်း ကံကောင်းတယ် မမ မင်းကို လွမ်းပြီး ပြန်တွေ့ချင်တယ် မင်းပြန်လာပါစေ ဆုတောင်းနေတာ ။ “မမ လိမ်တယ် အပျိူကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့” “ခ်ခ် မင်းလေးက တ ကယ့်မလိုးဘူးတဲ့အရိုင်းလေး” “သေနာကြီး မှောက်နေပြီ “ လာမောင်လေး ဟိုဘတ်အခန်းထဲ ကို” မမစန်းက အိပ်ယာခင်းဖို့ကုန်းနေတုန်း ကျနော်လည်း လီးကတောင်နေတော့ နောက်ကနေ ထမီလှန်ပြီး မမစန်း အဖုတ်ထဲ့ စောင့်ထည့်လိုက်တယ့် “အမလေး လူဆိုးလေး ကြမ်းထျာ” မမစန်း ခုတင်ပေါ် အလိုက်သင့် မှောက်ချကုန်းလိုက်တယ်။
ခါလေးကိုင်ကိုင်စောင့် အင့် အာ့ မောင်လေးရယ် ကောင်းလိုက်တာ အင့် အင့် မမစန်းလည်း အရည်တွေထွက် ဗြွတ် ဗြွတ် အို မောင်လေး ရယ် အင့်အင့် အင့်ပိုစရှင်မပြောင်းပဲ ကုန်းလိုးနေလိုက်တယ်ကျနော်ထွတ်ခါနီး စောင့်လိုးကာ ၂ဦးအတူ မှောက်ဖတ် မှိန်းနေလိုက်တယ်……. ဒုတိယပိုင်းဆက်ရန် ” မ ဝလေသော ရမ္မတ်ချို “ ” မဝလေသော ရမ္မတ် ချို ” ကျနော့်လီးလေး အာသာပြေ တော့ မမစန်း အဖုတ်ထဲကနေ ပြန်ထွတ်လာပြီ ။ မမစန်း ထမင်းဟင်းချ တ် ကျနော် ကတော့ TV ကြည့်နေလိုက်တယ် ည ၈ နာရီလောက် ဦးထွန်းမြင့် အမူးပြေ လာတော့ ထမင်းထစားတော့တယ် ။ “ညီလေး ထမင်းစားပြီး လား” “ကိုကြီးစောင့်နေတာ မစားရသေးဘူး” “ဟာ မိန်းမ ကျွေးနှင့်တာမဟုတ်ဘူးကွာ ကဲ ခူး စားကြမယ် “ ၃ ယောက်သား ထမင်းအတူစားပြီး ဧည့်ခန်း မှာ အလ္လာပ သလ္လာပ စကားတွေ ပြောကြပြီးမမစန်းက သူယောက်ျားနဲ့ ကျနော့်အတွက် လိမ္မော်ရည် ၂ခွတ် လာချပေးတယ်။ အတူလိမ္မော်ရည်သောက် ပြီး ခနနေတော့ ဦးထွန်းမြင့် အိပ်ယာထဲ ဝင်သွားပြီ ။ “ညီလေး အကို အိပ်တော့မယ် အမူးမပြေ သေးဘူးကွ ။ မနက်ရုံးမတက်နိုင်ပဲ နေအူးမယ် “ “ဟုတ်ကို ကြီး ကျနော်လည်း အိပ်မယ်” “ယောက်ျား ကျုပ် ကိုရီးယားကား ကြည့်လိုက်အူးမယ် “ “အေးပါ မိန်းမရယ် မင်းတို့မိန်းမတိုင်က ကိုရီးယားမှ ကိုရီးယားတွေ ကြည့်ကြည့်”“ကိုးရီးယားက အပိုင်းဆက် စွဲတယ် ကိုကြီးရ” ကျနော်လည်း ကစားဖောရှော လိုက်ပြောပေးလိုက်တယ် ။ ဦးထွန်းမြင့် အိပ်ယာထဲ ဝင် သွားတော့ မမစန်းပါ လိုက်သွားတယ် ။ ကျနော်ခန တီဗွီကြည့်နေလိုက်တယ် ။ တအောင့် နေတော့ မမ စန်း ပြန်ထွတ်လာတယ် ။ ရင်သားနှစ်မွှာ မြင်ရတဲ့ ပါး လွာတဲ့ ညဝတ် အင်္ကျီလေးနဲ့ ဘော်လီကမပါ ။ ရင်နှမွှာ တောင့်တင်းလို့နို့၂လုံးရဲ့ ဖြူဖွေး အိစက်စက်က ကျနော့် လီးကို တန်းမတ်စေ တယ် ။
မမစန်းက ကျနော့်နား တန်းကပ်လာပြီး လီးလေးကို လာကိုင်တယ်။ “ဟင့် ကောင်စုတ်လေး ဝတယ်မရှိဘူးနော် “မမ ဒီည မသင့်တော်လောက်ဘူး ကိုကြီး နိုးလာပါ့မယ်” “ဟိ အိပ်ဆေးအစွမ်းပြနေပါပြီကွာ “ “ဗျာ…….” “လာ အခန်းထဲ သွားမယ် “ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့ဘူးလေ မမစန်း ကိုယ်လုံးလေး ပွေ့ဖတ်အခန်းထဲ ဝင်သွားခဲ့တယ် ။ ခုထင်ပေါ် မမစန်းကို လှဲ ထမီလေးချွတ် လိုးရှင်းလူးလာတဲ့ မမစန်း စောက်ဖုတ်ကြီးကို သေချာဖြဲ လျှာလေးနဲ့ ယတ် ကလိပေးလိုက်တော့တယ် ။ “အို မောင်လေးရယ် အား….” “ကောင်းလိုက်တာ “ စောက်စိလေး ပြူးထွတ်နေတာကို စုပ်ပေးလိုက်တယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “အမလေးလေး မောင်းလေးရယ် လုပ်တက်လိုက်တာ အား “ “မမ အရည်တွေ ထွတ်တော့မယ် မောင်လေး ခန ဖယ်ပေးအူး “ မမစန်းက သူ့စောက် ဖုတ်ထဲက ထွတ်လာတဲ့အရည်တွေကို သူ့လတ်ခုပ်နဲ့ ခံပြီး အပြင်ထွက်သွားတယ် ။ကျနော့်မှာ တောင်နေတဲ့ လီးကို ကိုင်ထားပြီး အိပ်ယာပေါ် ပတ်လတ်လှန် ကျန်ရစ်နေခဲ့တယ် ။နားမလည် နိုင်စွာနဲ့ပေါ ။မမစန်း ပြန်ရောက်လာတော့ ကျနော့်လီးလေးကို စုပ်ပေး တော့တာပဲ။ လီးပေါ်က အေ၇ပြာလေး ထွန်း လီးထစ် လေးကို လျာလေးနဲ့ ယတ်။ ” အို မမ ရယ် ကောင်းလိုက်တာ “ မမစန်းက သူပါးစပ်ကြီးနဲ့ ကုန်းကုန်းစုပ် ပေးတယ် ။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “အား မမရယ် တက်စောင့်ပါတော့ “ မမစန်းက ကျနော် ပေါ်ကနေ လီးလေးကိုင် သူ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ တေ့ပြီး ထိုင်ချလိုက်တယ် ။ ဟော ဖင်လေးမြှောက် ပြန်ထု က်လိုက် ထိုင်ချလိုက် ။ “မမ ရယ် မြန်မြန်လေးစောင့် “ စောက်ဖုတ်က အရည်တွေ ထွက်နေတာဆို တော့. …. “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “”ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” မမစန်း မှာ ကိုယ်လေး ညွတ် ကျနေိာပေါ် ကိုင်းကျလာတယ် ။ နို့လေးကိုင်ချေ ပါးစပ်ခြင်း စုပ် ။ မမစန်းကတော့ တင်လေး မြောက်ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း စောင့်ပေးတယ်
ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ် မမစန်းကို ပတ်လတ်လှန်ခိုင်းပြီး ဒူးလေးထောင် သူ့ဖောက်ဖုတ်အဝကနေ ကျနော့်လီးလေး စောင့်ထိုး ” အင့် ဗြွတ် “ “အာ့ မောင်း ဖြေးဖြေးစောင့်ပါ “ “ဟုတ် မမ” လီးလေး အပြင်ထုတ် စောက်ဖုတ် အဝကနေ ဖြေးဖြေးလေး လီးအဆုံးထိ သွင်း ” အငှးးးးးးးးးးး” “အား အမလေးလေး ကောင်းလိုက်တာ မမ. အသားအိမ် ထိထိ သွားတယ် “ “အငှးးးးးး” “အား ကောင်းလိုက်မောင်လေးရယ်” ” စောင့် စောင့် လိုးတော့ “ “အင့် အင့် အင့် “ “ဗြွ တ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အာ့ အာ့ အာ့ “ “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အို့ အမလေးလေး မြန်မြန်စောင့်လိုးပါတေါ့” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “အာ့အာ့အာ့ အို့ အမလေးလေး” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” ” အင့်. …” သုတ်တွေထွတ်ခါနီး အသားကုန် စောင့်ချ လိုက်တာ “အငှ့” “အမလေး “ ကျနော် မမစန်းပေါ် မှောက်ချလိုက်ပြီး နုတ်ခမ်းစုပ်ပေး မမစန်းက ကျနော်ကို တင်းကြပ်နေအောင် ဖတ်ထားတယ်။ “မောင်လေး မမလေ ညတိုင်း မောင်လေးနဲ့ ခံချင်တယ်” “ခြေနေရပေါ့ မမရယ် မောင်လေးလည်း မမကို ညတိုင်း လိုးပေးချင်တယ်” “မောင်လေး မိန်းမ ရ ရင် မမကို မေ့မှာပါ” “မမေ့နိုင်ပါဘူး မမရယ်” “ခုလိုပဲ ခိုးခိုးလိုးကြတာပေါ့” “အင်းဟုတ်တယ် ခိုးလိုးရတာ ပိုအရသာ ရှိတယ်နော် မောင်လေး” ” ဟုတ် တယ် မမရဲ့” “မမ ခုနက အရည်တွေ ဘာလုပ်တာလည်း “ဟို လူကြီး ဟာပေါ် သွားထား သူ့ပုဆိုး ရွဲအောင် လုပ်ခဲ့တာပေါ့” “အော် ဉာဏ်ကောင်းပါဘိ မမ ရယ် ““မမ ကြက်ဥနဲ့ စပါကလင် သွားယူအူးမယ် ” ဟုတ် ချစ်မဝတဲ့ မောင့်မမ ပြွတ်” “သွား လူဆိုးလေး” မမ ယူလာတဲ့ ကြတ်ဥစပါကလင်သောက် ပတ် လတ်လေး လှန်နေ ။ မမ က ကျနော်ကို ဖတ်ထားတယ်။ ကိုယ်တုံးလုံး နို့လေးတွေက လာလာပွတ် ။ မမ အဖုတ်လေး ကို လတ်ညှိး လတ်ခလယ် လတ်သန်း ကြွယ် ၃ချောင်းနဲ့ နှိုက် ကလိ ။ မမ မှာ တွန့်တွန့် တက်လာတယ် ။ ကျနော် လီးလေးကို မမ က ဂွင်းထု ပေး နေတယ် ။ ကြတ်ဥစပါကလင် အစွမ်းက လီး လေး တောင်လာပြီး မမက ကုန်းစုပ်တေါ့ တာပဲ ။
“ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် “ 69 ပုံစံပြောင်း မမက ကျနော့်လီးလေးစုပ် ကျနော်က မမ စောက်ဖုတ်လေး လတ်နဲ့ ထိုး လိုက် စောက်စိလေး စုပ်လိုက် မမ အရည် ထွက်ခါနီးတော့ ဆင်းသွားပြီး ခါး လေးညွတ် ကုန်းပေးထားပြီး လိုးခိုင်းတော့တာပဲ ၊ မမ တင်ကါးကါးကြီးကြား က စောက်ဖုတ်လေး ပြူထွတ် ကျနော့် မာတောင်ထန်နေတဲ့ လီးကြီး စောင့်စောင့်လိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် ။ “အငှ့” “အမလေ့း” “အင့်” “အာ့ “ စောက်ရည် တွေက ရွဲရွဲကျလာ စောင့်စောင့် လိုး လို့ကကောင်း “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အမလေး ကောင်းတယ် မောင်ရယ်” “ဗြွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အာ့ အာ့” မမက ကုန်းရာကနေ ညောင်းလာလို့ညွတ်ကျသွားပြီး ဘေးစောင်းလေး နေပေး ကျနော်လည်း ပေါင်လေး တစ်ဖတ်မြောက် လိုးပေးလိုက်တယ် “အင့် အင့် အင့် “ “အို့ အမလေး အာ့ အာ့” အင့် “အာ့ လိုးတက်လိုက်တာ မောင်ရယ်” မမကို ပတ်လတ်လှန်ခိုင်းပြီး ခြေ၂ချောင်ထောင် စုကိုင်ပြီး လိုးထည့် “အင့် အင့်” “အာ့ အမလေး ကောင်းလည်း ကေါင်းတယ် မောင်ရယ် စောက်ဖုတ်နာတယ်” “မောင့် လီးမနာဘူးလား “ “ကျပ်သလိုပဲ မမ” “ကျပ်မှာပေါ့ စု ကိုင်ထားတာကိုး ဗြဲပြီး အားရပါးရ လိုးလိုက်စမ်းပါ မောင်ရယ်”မမ ပေါင်၂လုံး ကားပြီး အားရပါးရ စောင့် စောင့်လိုး ထည့် “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “ဗွတ်ဗွ တ်ဗွတ်ဗွတ်”“အာ့ ကောင်းလိုက်တာ အမလေး” “ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” “အာ့ အာ့ အာ့ “ “မောင်လေး ပြီးအောင် စိတ်ကြိုက် စောင့်လိုး တော့ ““ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်”ဗွတ် ဗြွတ် ဗြွတ်” ” အာ့ အမလေး အာ့ အာ့ အားးး” “အင့် “အားးးး” “အမလေး မောင်လေး ရယ် စောက်ဖုတ်လည်း နာပြီးကျိန်နေပြီ အိပ်ကြရအောင်နော် “မင်းလည်း ပင်ပန်းနေပြီ” “ဟုတ် မမ “ကျနော်နဲ့ တူတူ အိပ်မှာလား” “မမ ပင်ပန်းနေပြီ မနက်မနိုးလောက်ဘူး.ဟိုလူကြီး နားသွားအိပ်တော့မယ် ။ မမ. မနက်မနိုးရင် ဟိုလူကြီး သိသွားပေါ့” “ဟုတ် မမ” အပိုင်း(3) ဇာတ်သိမ်း ဆက်ရန် ” အချစ် ကြီးသူ၏ မေတ္တာ” စာဖတ်သူတို့ရင်ထဲ ဟာခနဲ ဟင်ကနဲ ဖြစ်သွားမဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေး စောင့်မျော် >>>>>
အပိုင်း(၁)ခရီးတစ်ညရဲ့စွဲမတ်စရာ အပိုင်း(၂)မဝလေသော ရမ္မတ်ချို အပိုင်း(၃) ဇာတ်သိမ်း “”အချစ်ကြီးသူတို့၏မေတ္တာ”” မနက်မိုးလင်းတော့ ထမင်းကြော်စား ကာဖယ်သောက်ပြီး အကိုကြီးနဲ့အတူ ရုံးသွားခဲ့တယ် ။ ညနေ စောစောလေး ရုံးက ပြန်လာပြီး အိမ်ရှေ့မင်း ထန်းတောတက်သွားပြီး ထန်း ရေသောက် ကြတယ်။ ကိုကြီးပဲ ခေါ်တာပါ ။ ထန်းတောထဲ သီးသန့်နေရာမှာ ထိုင် ထန်းရေ တစ်မြူ မှာလိုက်တယ် ။ ကိုကြီးက မထင်မှတ်ပဲ စကာတွေ ရင်ဖွင့်လာတယ် ကျနော် အရမ်းအံ့သြ မိတယ် ။ “ညီလေး….” “ဗျာကိုကြီး..” “မနေ့ညက မင်းနဲ့ကိုယ့်မိန်းမ. ……” “ဗျာ…..” ကျနော် အံ့သြ တာထက် တုန်လှုပ် ခြောက်ခြား လိပ်ပြာမလုံ ဓားခံရတော့မလား ဗိုက်တွေတောင် ယားလာတယ်။ “မအံ့သြပါနဲ့ ညီလေး ..အကိုခွင့်လွတ်တယ်” “ဒါပေမဲ့ မင်းကတိ တစ်ခုပေးရမယ်..ငါ့မိန်းမ မင်းမမ ပေါ့ကွာ. .သူကို ကိုယ်ဝန်ယူအောင် မင်းပြောပေးရမယ် “ “ဘယ်လိုဘယ်လို…ကိုကြီး” “အကိုတို့လင်မယား အစက သိပ်ချစ်တာ စီးပွားရေးအရင်စု ကလေးနောက်မ ယူမယ်ပေါ့ကွာ”“လွန်ခဲ့တဲ့6လ လောက်က အကို့ပန်းလုံးဝ သေသွားခဲ့” “ဗျာ….ကိုကြီး မကုဘူးလား” “ကိုယ့်မိန်းမနဲ့မဆက်ဆံတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ” “အစက သူကို့ကလိ ခနပဲတောင်လာ မလုပ်ဖြစ် ပန်ပြီး သေသေသွား” “သူ့လည်းမပြော ကျိတ်ကုရင်း လွန်ခဲ့ တဲ့ 6လလောက်က လုံးဝသေသွားတာ” ” ဒါလည်း အကိုအပစ်တွေပါ ။ အကိုက အလုပ်ကြိုးစား ငယ်ငယ်နဲ့ မန်နေဂျာဖြစ် ရန်ကုန်မှာ သိတဲ့အတိုင်း ကလပ် သွား ရုံးက တပည့်လေးတွေစည်းရုံးပြီးအရက်တွေအရမ်းသောက် ကုမဏီကဆော်လေးတွေကိုလုပ်တွေသမျှဖာလဲအကုန်လုပ် အဲဒီမှာ သူတိုစီကကူးတဲ ရောဂါယောက်င်္ကျားရေားဂါစဖြစ်တာအကုန်သောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒဏ်တွေပေါ့ကွာ” “ဒါနဲ့ မနေ့ညက မမနဲ့ကျနော့်ကို ဘယ်လို သိတာလည်း ကိုကြီး” “အကို အရက်သောက်ရင် ဘယ်တော့မှ မမူးဘူး ၊ ပန်းသေ လို့မိန်းမကို မဆက်ဆံ နိုင်ချိန်ကစ သောက်တယ် အရက်မူးချင်ယောင်ဆောင်တယ် မိန်းမ နောက်မီးလင်းလား သိချင်လို့မူးချင်ယောင်ဆောင်တာ ။”
“တနှစ်အတွင်း မိန်းမလည်း နောက်မီး မလင်း ပါဘူး” “မူးလို့အိမ်ကို ဘယ်ဧည့်သည်ခေါ်လာလာ သူ့မကြိုက်ဘူး ပွဲကြမ်းတယ် “ “ဧည့်သည်လည်း လန့် ပြေး” “မင်းကို ခေါ်လာတော့ သူဘာမှမပြောတာ သတိထားမိတယ်”ထမင်းချတ်ခိုင်းတော့ မငြင်းဘူး” “အရင်ကဆို အပြင်မှာကျွေးပါလား ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်ပြောတာ” “အကို အရက်ဘယ်တော့မှမမူးတဲ့သူ မနေ့ညက ထမင်းစား လိမ္မော်ရည်သောက်ပြီး အိပ်တာ မိုးတလင်း” “မိုးလင်း အကို နိုးတော့ အကို့ပုဆိုးနဲ့ ငယ်ပါမှာ အရည်ရွဲနေတယ် ““မင်းအခန်းထဲဝင်တော့ ငါ့မိန်းမ ခေါင်းစည်း ကြိုးရယ် အောက်ခံဘောင်းဘီ တွေ့တယ်” “မင်းကလည်း ကိုယ်လုံးတည်း” “ကဲပါ ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ မင်းမမကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့မင်းသေချာပြောပြ တာဝန်ယူပေး အကို အကုန်ခွင့်လွတ်ပါတယ်” ကျနော် နဲ့ကိုကြီး လည်း ထန်းရည်သောက် လေလေးတစ်ဖြူးဖြူး ခေါင်းလေးက ရီဝေ ရီဝေ လမ်းလေးလျောက်ပြန်လာခဲု့ကတယ် လမ်းမှာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခု ဝင် ဒန်ပေါက်၃ ထုပ် အကိုကြီးဝင်ဝယ်ပြီး အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့တယ်။
“ရှင်တို့ မူးလာကြပြီလား နှစ်ယောက်လုံး” “ကလေးကို ပါဖျတ်ဆီးလာတာပေါ့” “ထန်းရည်လေး နည်းနည်းတိုက်တာပါ ဘာမှဖြစ်ဘူး မိန်းမ ရော့ ဒန် ပေါက် စားကြမယ် ပြင်တော့” ထမင်းဝိုင်းမှာ အတူစားကြပြီး အရက်တစ်လုံး ဝယ်လာကါ ထပ်သောက်နေတယ် “ “ကလေးကို ထပ်မတိုက်နဲ့တော့ “ “စိတ်ချပါ လုံးဝမတိုက်ဘူး “ မမစန်းက မသောက်တော့နဲ့မပြောပဲ ကျနော်ကို မတိုက်ဖို့သာပြောတယ်။ ကိုကြီးကတော့ မထေ့တထေ့ စကားလုံးတွေ ပြော တော့ ကျနော်အနေရခတ်လာတယ်။ ခွတ်ကြမ်းချ ခနနဲ့ တစ်လုံးကုန် မူးလာပြီး ထသွားတဲ့ နောက်ဆုံးစကားလေးက ကဗျာဆန်သွားတယ်။ ” တိကျတဲ့ ဒီည ငါ့ဘဝရဲ့ အဖြစ်မှန် တစ်ကို တည်းပဲ အိပ်စက်ရန် စိတ်အမှန်ကျိတ်ခံလို့ နိဗ္ဗာန်သို့မူးစေသတည်း” မမစန်းကတော့ “ဒီအမူးပေါက်ကရလျောက် ပြော ပြီး အိပ်တော့မယ် “ “မင်းလည်း ရေချိုးတော့ မသောက်တက်ပဲ လျောက်သောက်” “နေအူး ထမင်းစားပြီး တန်းမချိုးနဲ့ ခနနေအူး” မမစန်းကတော့ ပန်းကန် တွေဆေး ကျနော်က TVဖွင့်ကြည့်နေလိုက်တယ် ။ မမစန်း ပန်းကန်ဆေးပြီး ကျနော့်ကို ရေချိုးခိုင်းတယ်။ “မောင်လေး ရေချိုးတော့ “ “ဟုတ် “ ကျနော် လည်း ရေချိုးခန်းဝင် ရေချိုး လေးငါးဆယ်ခွက်လောင် ဆပ်ပြာတိုက်နေတုန်း မမစန်းက တံခါးလာခေါက် ဖွင့်ခိုင်းတယ် ။ ကျနော်လည်း ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ မမစန်း က ထမီရေလျားနဲ့ ရေအတူတူချိုးမယ်တဲ့၊
ကျနော့်ကို အတင်းဖတ် နှုတ်ခမ်းတွေ စုပ်တော့တာပဲ။ “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” “ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” ကျနော်လည်း မမစန်းထမီကို ချွတ်နို့အုံတွေ ကိုခြေ နို့သီးလေးလေးခြေခြေပေး တစ်ဖတ်က မမစန်းစောင်ဖုတ်ကြားလေး မြောင်းထဲ အပေါ်အောက်ဆွဲပွတ်ပေး မမစန်း ကလည်း ကျနော်လီးကို ဂွ င်းထုပေး လီးက တင်းတောင်လာတော့ မမစန်းက သူ့စောက်ဖုတ်ထဲတေ့ ကာ ကျနော်ကို အတင်း ဖတ်ထားတယ်။ကျနော်လည်း မမ ကို နံရံကပ် ခြေတစ် ဖတ် ပေါင်ကနေမြှောက် ကိုင် လိုးပေးလိုက်တယ် “အင့် အင့် အင့် “ “အာ့ ကောင်းလိုက်တာမောင်ရယ် အလို ပထမဆုံ ခံဘူးတာ တစ်မျိုးလေးပဲ” “အင့် အင့် အင့် “ “အင့် အင့် အင့် “ “အာ့ အာ့ အာ့” နှစ်ယောက်သား ထိုင်ချလိုက်ပြီး မမစန်းက စောင့်ပေးတယ် အဖုတ်က အရည်တွေ ထွက် မမစန်းကလည်း အရမ်းစောင့် “ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်” “ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်” “ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်” “အား မမရယ် ကောင်းလိုက်တာ” “မောင်လေးရယ် ပြီးသေးဘူးလား “ “ဗွတ် ဗွတ် ဗွ တ်” “အာ့ အူး မမ ရယ်”“မမ ရေကန်ပေါ် လတ်ထောက်ကုန်းလိုက်” “အင်း “ မမစန်း တင်ပါးကြီးကြီး ကြီးတွေကိုင် စောင့် စောင့် လိုး“အင့် ဗွတ် အင့် ဗွတ် အင့်” “အ့မလေး မောင်နော် ခုနောက်ပိုင်း အစောင့်ကြမ်းတယ် “ “အင့် ဗွတ် အင့် ဗွတ် အင့်” “အ့ အ့ အ့” ပြီးခါနီး မမစန်းခါးဖတ်ပြီး အဆုံးထိစောင့် လိုးလိုက်တယ်“အ့မလေး……..အင်း” “မမ ခန စိမ်ထားမယ်” “မောင့်သဘော…အအေးပတ်အူးမယ်” “အင်းပါ “ အတူ ရေချိုး သူ့ကိုယ်ပွတ်ဆပ်ပြာတိုက် ကိုယ့်သူပွတ် ဆက်ပြာတိုက် ဖီးက တက်ပြီးရင်းတက်နေတော့ တာပဲ။
“ဟွန့်တော်ဦးမောင် . အအေးပတ်မယ်” ရေချိုးပြီး မမက သေချာကို တဘက်နဲ့ရေစင်အောင် သုတ်ပေးတယ် ။ အခန်းထဲအေးဆေး နား ။ မမစန်းကလည်း သနပ်ခါးလေးလူး မထီရေလျားနေနဲ့ လိုးရှင် လူး ပေးဖို့ကျနော် အခန်းထဲလာ ။ ကြတ်ဥ၂လုံးပါယူလာပေးတယ်။ ကျနော်လည်း မမစန်းကို စိတ်တိုင်းကြပွတ် လိမ်းပေးနေလိုက်တယ် ။ “မောင်. ..လိုးချင်နေပြီလား” “မမ သဘောမမဆန္ဒလေ” “ခန နားအူးမယ်လေ ရော့ မောင်ကြတ်ဥသောက်နှင့်မမ အင်္ကျီ သွား ဝတ်အူးမယ်” “ဟုတ် “ မမ အင်္ကျီဝတ်ပြီးပြန်လာပြီ။ဘော်လီတောင် မပါဘူး။ ပတ်လတ်လှန်နေတဲ့ ကျနော့်ကို အတင်းဖတ် နို့၂လုံးနဲ့ ပါးစပ်လာထိုး ပေး စနေတယ် ။ ကျနော်လည်း မမအင်္ကျီမချွတ် နို့လေးကိုင် စို့။ မမသာယာနေလိုက်တာ ။ မမ ကို အတင်းဖတ် ဘေးတစောင်း မျတ်နှာဆိုင် ဖတ် နှုတ်ခမ်း လေးစုပ် မမကို နားချရတော့မယ်ပေါ့ ။ “မမ. ..” “ပြောလေ. မောင်” “မမ တားဆေးထိုးထားတာလား ဆေးစား တာလား” “ဟိုနေက ဆေးစားထားတယ် ဘာဖြစ်လို့ လည်း” “မစားပါနဲ့တော့ မမ ။ မမ ခလေးယူလေ” “ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်း ဟိုလူကြီး သိသွားမှာပေါ့” “ကိုကြီးက သိတယ် မမရဲ့..ညနေက ကျ နော့် အကုန်ပြောပြတယ်” “မမနဲ့သူ မဆက်ဆံတာ ၁နှစ်ကျော်ပြီ “ “ဟောတော့် တကယ်ပြောပြတာလား” “ဟုတ်တယ် မမရဲ့၊ မမဆန္ဒကို သူလုံးဝ မ ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်တော့တဲ့ အချိန် လွန်ခဲ့ တဲ့6လလောက်က စပြီး သူ အရက်ကို နေတိုင်း သောက်လာခဲ့တယ် “
“အေး အတာဟုတ်တယ် “ “တကယ် တော့ သူ မမူးပါဘူး မမ ကို အကဲ ခတ်တဲ့စောင့်ကြည့်ရုံ သတ်သတ် သောက်တာ” “မမလည်း သူပေါ်သစ္စာရှိတယ် လို့ပြောတယ်” “ဒါပေမဲ့ ကျနော်နဲ့ကြ မမက စိတ်ပါသွားတယ်တဲ့” “အ့ ရထားပေါ်မှာလေ ရှင်လေးက လူကို လာထောက်တာကိုး” “ချချ “ “လင်နဲ့တနှစ်ကျော် မဆက်ဆံရတဲ့ မိန်းမ အထောက်ခံ ရတော့ ဆာလာတာပေါ့. “ “ပြီး ရှင်လေးက အပျို အအို မခွဲတက်တဲ့ အရိုင်းလေးဆိုတော့ ကျုပ်မခွဲနိုင်ဘူးပေါ့” “မမ အဆို ကလေးယူပေးလိုက်ပါနော် .၊ ကို ကြီးနဲ့မမ အရင်က ကလေးအရမ်းလိုချင် ကြတာတဲ့ စီးပွားရေးကြောင့် မယူဖြစ်ကြတာဆို “ “အင်း ဟုတ်တယ် “၊မမ ပေးပါအူးမယ် မေါင် ကရော မောင့် ကလေးကို အဖေဆိုတဲ့ ခေါ်ပိုင်ခွင့် မလိုချင်ဘူးလား ၊မမ နောက်ပိုင်းမှ အရှတ်ခွဲတာ မလိုချင်ဘူး” “မမရယ် မမတို့ဘ၀ ပျော်ရွှင်ပိုင်ဆိုင်ရင် ကျနော် ဘယ်လိုနေရနေရ နေနိုင်ရမှာပေါ့”“ကိုကြီး ပူပန်နေတာက မမ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ နေပြီး သူ့ကိုခွဲသွားမှာ စိုးရိမ်နေတယ် “ “သူကပြောတယ် မမ ၊မမ ကိုယ်ဝန်ရတဲ့နေကစ သူအရက်ဖြတ် မယ်တဲ့” “သူသားသမီးအရင်း မဟုတ်မှန်း ကျနော်တို့၃ ယောက်ပဲသိတာ” “သူလတ်ခံနိုင်တယ်တဲ့၊ မိသားစုဘဝရယ် နောက် မမက မိခင်ဘ၀ နဲ့ တည်ငြိမ်ပြီး သာယာတဲ့ဘဝကို သူလိုချင်တယ်တဲ့” “အင်းလေ သူတောင် စိတ်ထားကြီးတာပဲ မမ ကလေးယူပေးပါ့မယ်” “မင်း လေးကလည်း ပြီးခါနီး သုတ်ကို စောင့်စောင့်ထည့်နေတာ ၊ ဆေးစားလည်း ရပါ့မလား မမ တွေးပူကြောက်နေတာ” “ခုတော့ မမ ဆေးမစားတော့ဘူး ဟုတ် ပြီလား ချစ်လင်ငယ်လေးရယ်”
“ဟားဟားဟား” “ရယ်ပါနဲ့ ဟွန့်ရှင်လေးက မိန်းမယူသွားရင် ကျုပ်က အသည်းကွဲရအူး မယ်” “မမရယ် ရင်ထဲက မေတ္တာ အမြဲ ရှိနေဖို့ပါ” “မမ ကျနော်နဲပဲ တစ်ညလုံးအိပ်တော့နော်” “ဖြစ်ပါ့မလား. တော်ကြာ ဟိုလူက အချိုသတ် ၂ယောက်လုံးသတ်နေမှဖြင့်” “မမ ကျနော့်ချစ်လား” “ချစ်တာပေါ့ မောင်ရယ် “ “ဒါဆို ကိုကြီး အချိုသတ်တယ်ဆိုလည်း ၂ယောက် အတူသေခံနိုင်တယ်ပေါ့” “အင်းပါရှင်လေးရယ် ရှင်နဲ့အတူအိပ်ပါ့မယ် “ချစ်လိုက်တာ မမရယ်” မမ နှုတ်ခမ်းလေး စုပ်ပေး အင်္ကျီလေး လှန် နို့လေးတွေခြေ မမကလည်း ကျနော့်လီးလေး ဆွပေးနေတယ်။ မမ ထမီကို ချွတ် အဖုတ်လေး ကိုင်တော့ အရည် လေး စို့နေပြီ ။ ကျနော်လည်း မမပေါ် တက်မှောက် မမက လီးလေးကိုင် အဖုတ်လေးတေ့ ကျနော်လည်း ထိုးသွင်း လိုက်တယ်” “အငှးးးးးးးး” “အားးးးးး” “အငှးးးးးးးး” “အားးးး” “အငှးးးးးးးး” “အားးးးး” “အင့် အင့် အင့် အင့်” “အာ့ အာ့ အာ့ အာ့” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့” “ဟွင့် ကြမ်းထျာ ဖြေးဖြေးလိုး” “အင့် “ “အာ့ “ “အင့် “ “အာ့ “ “ပုံစံပြောင်းမလား မောင်” “မပြောင်းတော့ဘူး မမပြောင်းချင်လား” “မောင့်သဘောပါ “ “ဒူးလေးပဲထောင် လိုးတော့မယ်” “အင့် အင့် အင့်” “အာ့အာ့” “အင့် အင့် အင့် အင့်” “ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ် ဗွတ်” ” အမလေး အာ့ အာ့ “ “အင့်အင့်အင့်အင့် အင့်အင့်အင့်အင့်” “အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့အာ့” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်အင့်” “အမလေး အားးးးး’” ” အင့် “ “အမလေး အားအား ၊ အို အရည်တွေ ထည့်လိုက်တာ ၊ မောင်ရယ် “္မ မမ ထဲစိမ်ထည့်ပြီး မမပေါ် မှောက်ဖတ်ထားလိုင်တယ် ။ မမက လည်း ကျ နော့်ကို အတင်းဖတ်ထားတယ် ။နှုတ်ခမ်းတွေစုပ် အတူစုပ်နေလိုက်တယ်” “မောင် မောလား” “မောတာပေါ့ မရဲ့ “ “ခ်ခ် လီးထုတ်တော့လေ “ “တရေးနိုးမှ ထက်လိုးတော့ “ ကျနော်လည်း မမ ပေါ်ကဆင်း မမကို ဖတ်ခွ အိပ်နေလိုက်တော့တယ် ။ ၂နာရီထိုးလောက် တရေးနိုးတော့ မမ က ဘေးစောင် ကျနော်က ပတ်လတ်နှဲု့။ဘေး စောင်နေတဲ့မမ ထမီမပါ တင်ပဆုံကားကား ကြီးမြင်တော့ လီးက တောင်လာပြီး မမကို ဖတ်လိုက်တယ် ၊မမလည်း နိုးလာပြီး တင်လေး က အလိုက်သင့် ကပ်လာတယ် ကျနော်လည်း နို့လေးတွေပေါ် လတ်ရောက် မမကလည်း ကျနော်လီးလေးကိုင် အဖုတ်ထဲတေ့ပေးတယ် ။ နောင်ကနေ ပဲ ပု ဇွန်ကွေး လိုးပေးနေပြီး ပြီးခါနီးမှ မမကို ပတ်လတ်လှန် စောင့်လိုးပြီးလိုက်တယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ကိုကြီးကကျနော့်တို့ကို လာနှိုးရတယ် ။ မမကတော့ မျတ်နှာပူနေရှာတယ် ။ ထမင်းကြော်တွေ လဘက်ရည်တွေလာချပြီး မီးဖိုချောင်ထဲ သွားနေတယ် ။ ကျနော်တို့လည်း ရုံးသွား ပုံမှန်လုပ် ညနေကြ ကျနော်က အဆောင်ပြန် အဝတ်အိပ်ယူနေတယ် ။ကိုကြီးက အရင်ပြန်နှင့် ။ မမစန်းကတော့ သူယောက်ျား ကို ကျနော် မလားတော့ မမေး ။ ကိုကြီးက သူ့မိန်းမ အနေထားသိပုံ ရလို့နေမှာ အဆောင်မှာ အဝတ်အိပ် ဝင်ယူ နေတယ် ငါ အိမ်မှာနေတော့ ပြောလိုက်တယ်။ ကျနော်လည်း မမစန်းကို တစ်ကယ်ချစ်တာ လား ကာမ ဆန္ဒကြောင့်လား စွဲလန်းတာတော့ အမှန် ။ တစ်ရက်နှစ်ရက်တော့ ၃ယောင်သား မျတ်နှာချင်းဆိုင် စကား မပြောဖြစ်ကြ ။ အထူးသဖြင့် မမနဲ့ကိုကြီး စကားနည်းသွားကြတယ် ။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် နားလည်ရ ခတ်ခတ်ကြီး။ ညနေတိုင်းကိုကြီးက သောက်လာတယ် ၊ ထမင်းတော့ အတူစားကြတယ် စကားတွေ သိပ်မပြောဖြစ်ကြ။ မမက အိမ်အလုပ်ပြီး ကျနော် လာအိပ်တယ် ။ ဒီ လိုနဲ့ မမ ကိုဝန် ၃ လ ရလာတော့ ကိုကြီးလည်း အရက်ဖြတ်လိုက်ပြီ ၊ မမကိုလည်း ဂရုစိုက်လာတယ် ။ ကျနော်က အိမ်မှု့ကိစ္စအကုန်တာဝန်ယူလိုက်တယ်။ မမကို ဘာမှမလုပ်ခိုင်းတော့ ။ တစ်ခါတလေ စကားဝိုင်းမှာ ၃ ယောင်သား စနောက်နေကြသေး ။
“ငါ့မိန်းမ အရမ်းကံကောင်းတယ် လင်၂ ယောက် ဂရုစိုက်တာ ခံရတယ် “ “ရှင်တို့လည်း ဘယ်လိုရေစက်ကြောင့် ဒီလို နားလည် မေတ္တာကြီးနေမှန်းမသိဘူး” “မမက ကံကောင်းတာနော်” “ညီဇော်ဇော် မင်းက ဝဋ်ခံနေရသလိုပဲ” “အလိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး အကိုကြီးရာ ကျနော် တို့က မိသားစုတွေပဲလေ “ “ငါရုံး က ကောင်မလေးတွေ စည်းရုံး မင်းအနားကပ်ခိုင်းတယ် ။မင်းက လုံးဝ စိတ်မဝင်စား”မမ မှ မမဖြစ်နေတာလေ” “မမက ကိုယ်ဝန်နဲ့လေ သူစိတ်ဆင်းရဲရင် ကလေးအတွက် မကောင်းဘူး တကယ်လည်း ရုံးကကောင်မလေးတွေ စိတ်မဝင်စားလို့ပါ” “အောင်မယ် နင်က ကလေးအဖေဖြစ်တော့ မှာနော် “စိတ်ဝင်စားစရာလား” “မစန်းရယ် မပြောပါနဲ့ “ “သူ့ကို တမင်စတာပါ “ “တစ်ယောက်မေတ္တာ တစ်ယောက် နားလည်ပြီး ဒီမိသားစု ထာဝရပျော်ရွှင်ဖို့ မောင်လေး မင်းကို မမ ညီမနဲ့ပေးစားမယ်” ဒီလိုနဲ့မမစန်းကိုယ်ဝန်၆လ ရတော့ သူညီမ သင်းသင်းနွယ်နဲ့ ဇော်ဇော်ကို လတ်ထပ်ပေးလိုက်တယ် ။ နားလည်မှု့ အပြည့်နဲ့ မိသားနှစ်စု တစ်အိမ်ထဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သိုက်သိုက်ဝန်း ဝန်း နေထိုင်သွားခဲ့ကြလေပြီ ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged မစနျးနဲ့ လိုးမိခွငျး